အဆိုပါ debunker Debunking: အအယ်ဒီတာ "Prause et al မှစာတစ်စောင်၏ Critique သည်။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ "၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အဆိုပါ debunker Debunking: အအယ်ဒီတာ "Prause et al မှစာတစ်စောင်၏ Critique သည်။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု "
အမျိုးမျိုးသောမှတ်ချက်တွေ, ဆောင်းပါးများနှင့်တွိအတွက် နီကိုးလ် Prause မသာခဲ့အခိုင်အမာထားပြီး Prause et al ။ , 2015 မှားသည်အဆိုပါစွဲမော်ဒယ်တစ်ဦး core ကိုသဘောတရား, ထို cue reactivity ကို biomarker"ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်"လွတ်လပ်သောဓါတ်ခွဲခန်းများကပုံတူကူးယူအပြုအမူလေ့လာမှုများတစ် series တွေဟာစွဲမော်ဒယ်၏အခြားဟောကိန်းများ [တွင်မှအမှား]။ " Prause ကသူမ၏ ၂၀၁၆“ အယ်ဒီတာထံပေးစာ” (ဤစာမျက်နှာတွင်ဝေဖန်ထားသည်) ကိုသူမ၏အထောက်အထားအဖြစ်ကိုးကားသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် Prause သည်၎င်း၏ပျက်စီးနေသောဥများအားလုံးကိုခြင်းတောင်းထဲ၌ကောက်ယူထားသည်။ စာပိုဒ်တစ်ခုတည်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤသည် YBOP တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု debunking အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် အဆိုပါ debunker (နီကိုးလ် Prause) နှင့်သူမ၏အကြိုက်ဆုံး "ဥ။ "
အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်မှတုန့်ပြန် Matuesz Gola ရဲ့ သူတို့ရဲ့ 2015 EEG လေ့လာမှုဝေဖန်ဆန်းစစ် (Prause et al။ , 2015), Prause et al။ “ အယ်ဒီတာကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်စာပေးတယ်။Prause et al ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု, "ကျနော်တို့အဖြစ်ရည်ညွှန်းလိမ့်မယ်Gola မှ Reply။ " (စိတ်ဝင်စားစရာမှာအယ်ဒီတာ၏မူရင်းလက်မခံနိုင်သောလက်ရေးမူစာမူကိုပြန်လည်ရေးသားခြင်းသည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်အားသာစာရေးသူအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူမ၏တွဲဖက်စာရေးဆရာများသည်ဂါလာအားပြန်လည်ရေးဆွဲခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ခြင်းလား၊ သို့မဟုတ်သူကတစ်ကိုယ်တော်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလားဆိုတာမသေချာပေ။
ဆက်ဆက်, Gola ဖို့စာပြန်ရန်အများစုကခုခံကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားမှုမှမြှုပ်နှံနေသည် Prause et al ။, 2015 အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ။ ၂၀၁၅ တွင် Nicole Prause ကသူမ၏အဖွဲ့၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလေ့လာမှုသည်“ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုတရားဝင်သုတေသီလိုရှိ၏ အစဉ် တစ်ခု "debunked" ရှိသည်ဖို့ပြောဆိုချက်ကို သုတေသနတစ်ခုလုံးကိုလယ်ပြင် နှင့် "အတု" ခံရဖို့ အားလုံးယခင်လေ့လာမှုများ တစ်ခုတည်း EEG လေ့လာမှုနှင့်အတူ?
ယခု ၂၀၁၆ တွင် Gola ၏အဖြေသည်နိဂုံးချုပ်သည် Prause ၏ EEG လေ့လာမှုမှ ဦး ဆောင်သောစာရွက်စာတမ်းများသည်“ စွဲလမ်းမှုပုံစံ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များစွာ” ကိုမှားယွင်းစေသည်ဟုညီမျှစွာမလိုလားအပ်သောအခိုင်အမာဖော်ပြသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုဒ်မ #1 ငါတို့သည် Gola ဖို့စာပြန်ရန်အတွက်ကိုးကားသည့်စာတမ်းများအမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့ (နှင့်မတွေ့လျှင်) အဘယျသို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအဖြစ်ချန်လှပ်များစွာသက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများလင်းဆောင်ခဲ့သဖြင့်လိမ်လည်ပြောဆိုချက်ကို debunk ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုဒ်မ #2 တှငျကြှနျုပျတို့ Gola ဖို့စာပြန်ရန်တခြားကလက်ခံတောင်းဆိုမှုများနှင့်တိဆန်းစစ်။ ကျနော်တို့စတင်ခင်မှာ, ဒီမှာဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှလင့်များနေသောခေါင်းစဉ်:
ပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့် "Porn စွဲ" နဲ့တသမတ်တည်းရှိမနေသောထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ Modulation (Prause et al ။ , 2015) နီကိုးလ် Prause, Vaughn R. သံမဏိ, ကင်မရွန် Staley, ဒင်း Sabatinelli, Greg Hajcake ။
အဆိုပါ ၏ YBOP ဝေဖန်မှု Prause et al ။, 2015 ။
တစ်ဆယ်ရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း of Prause et al ။, 2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10။ အားလုံးသဘောတူ Prause et al။ တကယ်တော့ desensitization သို့မဟုတ်လေ့တွေ့ရှိခဲ့ - စွဲနှင့်ကိုက်ညီ။
၏ Matuesz Gola ရဲ့ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015: ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများအတွက်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များအတွက် LPP ကျဆင်းခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ အားလုံးမော်ဒယ်ပေါ်မူတည်သည်။ (Prause, Steele, Staley, Sabatinelli, & Hajcak, 2015) အပေါ်ဝေဖန်ချက်။
Gola ကိုယ်တိုင်ကဖို့စာပြန်ရန်: Prause et al ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု.
ဒီတင်ပြချက်အတွက်ဂယ်ရီ Wilson က (ထိုနှစ်ခုနီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုများအပါအဝင်)5မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျ: porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
အပိုင်း ONE: အ Debunking Prause et al။ အဆိုပါစွဲ Model ရဲ့အခိုင်အမာမမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု
ဤသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းပိတ်ပွဲစာပိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Prause et al။ အဆိုပါ porn စွဲမော်ဒယ်တွင်မှအမှားတပါတည်းယူဆောင်အထောက်အထားအကျဉ်းချုပ်:
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Popperian ၏မှားယွင်းသောမှားယွင်းမှုပုံစံကိုအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်အသုံးပြုသည်။ စွဲစွဲလမ်းနေသူတစ် ဦး ချင်းသည်အသုံးပြုရန် (သို့မဟုတ်အမူအကျင့်တွင်ပါ ၀ င်ရန်) သူတို့၏တွန်းအားအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းကြောင်းပြသရန်လိုအပ်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပိုမိုပြproblemsနာများရှိသောသတင်းပို့သူများသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ကြသည် (Moholy, Prause, Proudfit, Rahman, & Fong, 2015; Winters, Christoff, & Gorzalka, 2009 မှပထမဆုံးလေ့လာမှု) ။ စွဲမော်ဒယ်များပုံမှန်အားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအများဆုံးအသုံးပြုသောဆိုးကျိုးများဖြစ်သော်လည်းလိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် erectile ပြproblemsနာများသည်အမှန်တကယ်မြင့်တက်ခြင်းမရှိပါ (Landripet & Štulhofer, 2015; Prause & Pfaus, 2015; Sutton, Stratton, Pytyck, Kolla, & Cantor, 2015) ) ။ စွဲလမ်းမော်ဒယ်များမကြာခဏပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်အပြုအမူအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်စေရန်သို့မဟုတ်လွတ်မြောက်ရန်အသုံးပြုသည်အဆိုပြုထား။ လိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများကိုတင်ပြသူများသည်ထိန်းချုပ်မှုများထက်အခြေခံ / ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (Prause, Staley, & Fong, 2013) ။ ထိုအတောအတွင်း Prause et al ။ ထုတ်ဝေပြီးကတည်းကနောက်ထပ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမော်ဒယ်လ် ၂ ခုသည် ပို၍ ထောက်ခံမှုရရှိခဲ့သည်။ (2015) ။ ဤရွေ့ကားမြင့်မားသောလိင် drive ကိုမော်ဒယ် (Walton, Lykins, & Bhullar, 2016) မူရင်း High-drive ကိုအယူအဆကိုထောက်ပံ့ (Steele, Prause, Staley, & Fong, 2013) တို့ပါဝင်သည်။ Parsons et al ။ (2015) ကမြင့်မားသောလိင် drive ကိုသူတို့အားအစီရင်ခံပြproblemsနာများ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်လိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဆင်းရဲခက်ခဲမှုများသည်ရှေးရိုးစွဲတန်ဖိုးများနှင့်ဘာသာရေးသမိုင်းကြောင်းနှင့်အဆက်ပြတ်ဆုံးဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည် (Grubbs et al ။ , 2014) ။ ၎င်းသည်ပြfilmနာရှိသောလိင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုသည့်အပြုအမူများ၏လူမှုရေးအရှက်ကွဲမှုပုံစံကိုထောက်ခံသည်။ လွတ်လပ်သောဓာတ်ခွဲခန်းပွားများမှုကြောင့်မှားယွင်းစွာကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားသည့်လိင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်း၏စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုစမ်းသပ်ခြင်းမှထိုအပြုအမူများ၏ပိုမိုသင့်လျော်သောပုံစံကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအထိဆွေးနွေးသင့်သည်။ ”
အထက်ပါပြောဆိုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မဖြေရှင်းနိုင်ပါက၊ Prause et al။ ဒါခေါ် "အတု" မှချန်လှပ်ရန်ရွေးချယ်:
အမှန်တကယ် porn စွဲအပေါ်လေ့လာရေး။ သင်ညာဘက်ဖတ်ပါ။ ကိုးကားရှိသမျှကိုလေ့လာမှုတွေ၏, တစ်ဦးတည်းသာ porn စွဲ၏အုပ်စုတစုပါရှိသောနှင့်သူတို့အားဘာသာရပ်များ၏ 71% ပြင်းထန်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဓိကအချက် - သင်ကိုးကားထားသောလေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအားမစုံစမ်းပါက“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ကိုမမှန်မကန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲသူများအပေါ်ထုတ်ဝေသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုအားလုံးသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုထောက်ခံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည် 56 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, Neurospychological, ဟျောမုနျး) အစွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
လူအားလုံးတို့သည်သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ် စာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးကညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုထောက်ခံတယ်။ ဒီမှာပါ 31 စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့တို့က, အညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ် supporting ။
ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးခြင်း / လိင်စွဲခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်နှိုးဆွမှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှု ၄၀ ကျော်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများ causation သရုပ်ပြ, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 80 လေ့လာမှုများကျော်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
လေ့လာမှု ၅၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်
မြီးကောင်ပေါက်ပေါ်မှာရှိသမျှအများအပြားလေ့လာမှုများ, porn အသုံးပြုမှုအရာဝတ္ထုအဖြစ်လူတွေကြည့်ရှုဆင်းရဲတဲ့ပညာရှင်များပိုမိုလိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားများ ပို. ကျူးကျော်, ဆင်းရဲတဲ့ကျန်းမာရေး, ဆင်းရဲတဲ့ဆက်ဆံရေးကို, အနိမ့်ဘဝကျေနပ်မှု, ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်သတင်းပို့သော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနည်းကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု, သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု, သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်တိုးလာ ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, နိမ့်လိင်စိတ်, သာ. ကြီးမြတ်အလိုလိုသဘောထားများနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးအများကြီးပို။ (အတိုခုနှစ်, ED ဖြစ်ပါသည် မဟုတ် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Gola သို့ပြန်ကြားချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၏အများအားဖြင့်အကြံပြုထားသည့်ဆိုးကျိုးများ” ။ )
Gola ဖို့စာပြန်ရန်ခုနှစ်, Prause et al။ အောက်ပါတို့မှတစ်ခုစီကိုတွင်မှအမှားမှကြိုးပမ်းမှု တောင်းဆိုချက် ("ဟောကိန်းများ") စွဲမော်ဒယ်နှင့်ဆက်စပ်သော။ Gola သို့ပြန်ကြားချက်မှသက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များနှင့်အထောက်အကူပြုလေ့လာမှုများကိုအပြည့်အဝပေးပြီးနောက်မှတ်ချက်များပေးသည်။
အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း: 1 ဆိုကြသည်။
PRAUSE: "စွဲလမ်းမော်ဒယ်အများစုမှာစွဲတစ် ဦး ချင်းစီကိုအသုံးပြုရန် (သို့မဟုတ်အပြုအမူတွင်ပါဝင်ရန်) မိမိတို့၏တွန်းအားအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းပြသရန်လိုအပ်သည်; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပိုမိုပြproblemsနာများရှိသောသတင်းပို့သူများသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ကြသည်။
လေ့လာမှု (၂) ခုကလွဲမှားသောအရာသည်မှားယွင်းသောအချည်းနှီးဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲရှိ၊ အရေးအကြီးဆုံးမှာမည်သူသည်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူ” ဖြစ်သည်မဟုတ်သည်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်စတင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုသင်မသိရပါကမည်သို့သောစွဲလမ်းမှု ((မည်သည့်စွဲလမ်းမှုကျွမ်းကျင်သူများကမည်သည့်စွဲလမ်းမှု) ကိုစွဲလမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်သင်စတင်မလုပ်ဆောင်ပါကမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ လေ့လာမှု (၂) သည်အမှန်တကယ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်၎င်းတို့အားဘာမျှမမှားစေသည့်အရာအားခေတ္တမျှဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့။
ဆောင်းရာသီ, ခရစ္စတိုဖာ, & Gorzalka, 2009 (အမျိုးသားများအတွက်အတွက်လိင်စိတ်နိုးထမသိစည်းမျဉ်းဥပဒေ):
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအမျိုးသားများသည်လိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုကြည့်ရှုစဉ်သူတို့၏လိင်စိတ်နိုးထမှုကိုအားလျော့စေနိုင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက်များ - လိင်မှုနှိုးဆွမှုကိုတားဆီးရန်အကောင်းဆုံးသောအမျိုးသားများမှာလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ရယ်မောရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုကိုနှိမ်နင်းရာတွင်အနည်းဆုံးအောင်မြင်သောအမျိုးသားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်တဲ့သူတွေထက်ပိုပြီးခွန်အားကြီးတယ်။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများ၏“ ဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးများရှိသော်လည်းအသုံးပြုမှုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း” နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။
ဤအွန်လိုင်းအွန်လိုင်းအမည်မသိစစ်တမ်းသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်သူသည်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူ” မဟုတ်ကြောင်းအကဲဖြတ်ခြင်းမပြုပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အကဲဖြတ်သည့်ကိရိယာမှာ“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုစကေး” (SCS) ဖြစ်သည်။ SCS သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲစွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများအတွက်ခိုင်လုံသောအကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်လေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ SCS ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ဆက်ဆံရေး စိတျထဲမှာကို (AIDS ရောဂါကပ်ရောဂါစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့် ဆက်စပ်. ) ။ အဆိုပါ SCS ပြောပါတယ်"အဆိုပါစကေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏နှုန်းထားများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်၏နံပါတ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအမျိုးမျိုး၏အလေ့အကျင့်များနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများသမိုင်းနဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပြသထားသည်။ "
Moholy, Prause, Proudfit, Rahman, & Fong, 2015 (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်စိတ်နိုးထ၏ Self-စည်းမျဉ်းခန့်မှန်း):
အထက်ပါလေ့လာမှုကဲ့သို့ဤလေ့လာမှုသည်မည်သည့်ပါဝင်သူများက“ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ” ဖြစ်သည်၊ ဒီလေ့လာမှုအပေါ်မှီခို အဆိုပါ CBSOB, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သုညမေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကသာဘာသာရပ်များ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်နေလျှင် ", လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ" အကြောင်းကိုမေးတယ်သို့မဟုတ် (ငါတစ်စုံတစ်ဦးကို HIV ပိုးပေးခဲ့တယ် "" ကျွန်မစိတ်ပူမိပါတယ်ငါကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းကို "ဥပမာ," "ငါဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများကြုံတွေ့") ။ ထို့ကြောင့် arousal ထိန်းညှိဖို့ CBSOB နှင့်စွမ်းရည်အပေါ်ရမှတ်များအကြားမည်သည့်ဆက်စပ်မှုအများအပြားမှသက်ဆိုင်ရာမဟုတ် အင်တာနက်ညစ်ညမ်း ပူးပေါင်းလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဘူးသူကိုစွဲ။
အထက်ပါ Winters လေ့လာမှုလိုပဲ, ဒီလေ့လာမှု porn ကြည့်နေစဉ် hornier ပါဝင်သူတစ်ဦးခက်အချိန်ဟာသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထချ-ထိန်းညှိခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ Prause et al။ မှန်: ဤလေ့လာမှု et al Winters, ပုံတူကူးယူ, 2009 ။ hornier လူတွေပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိသည်။ (Duh)
ဤလေ့လာမှုသည်အခြားသော Prause-team လေ့လာချက်များတွင်တွေ့ရသောဆိုးဝါးသောအားနည်းချက်ရှိသည်။ သုတေသီများသည်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ (အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊ လိင်ကွဲများ၊ လိင်ကွဲလိင်ကွဲသူများ) ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသော်လည်း၎င်းတို့အားစံ၊ ဖြစ်နိုင်စရာမရှိ၊ အထီးအမများ၊ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလေ့လာမှုရဲ့ရလဒ်တွေကအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနဲ့လိင်ကွဲလိင်ခြားသူများဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုသူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်မှုမှာကွဲပြားမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒါရှင်းပါတယ် မရအမှု.
မည်သည့်သင်တန်းသားများသည်မည်သည့်ညစ်ညမ်းစွဲသူများဖြစ်ကြောင်းမည်သည့်လေ့လာမှုကမျှဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းဂိုလာသို့ပြန်ကြားချက်သည်အမှန်တကယ် "အပြာစွဲသူများ" သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်နေစဉ်၎င်းတို့၏လိင်စိတ်နိုးထမှုကိုအနည်းဆုံးထိန်းချုပ်သင့်ကြောင်းဆိုထားသည် သို့တိုင် Gola ၏စာရေးသူများအနေဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲသူများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောနှိုးဆော်ခြင်းကိုခံရသင့်သည်ဟုထင်မြင်ကြသနည်း Prause et al ။, 2015 "porn စွဲ" ရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် နည်းသော လုပ်ခဲ့တယ်ထိန်းချုပ်မှုထက် vanilla porn ဖို့ဦးနှောက်ကို Activation? (သို့သော် အခြား EEG လေ့လာမှု ထို့အပြင်အမျိုးသမီး သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ နည်းသော ညစ်ညမ်းဖို့ဦးနှောက်ကို Activation ။ ) အဆိုပါတွေ့ရှိချက်များ Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူ align Kühn & Gallinat (2014), ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသော နည်းသော vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်ဦးနှောက်ကို Activation ။
Prause et al ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် EEG တွေ့ရှိချက်လည်းအတူ align BANCA et al ။ 2015, porn စွဲများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေဖို့ပိုမြန်လေ့တွေ့ရှိခဲ့ရာ။ အောက်ပိုင်း EEG ဖတ်ဘာသာရပ်များပေးဆောင်နေကြသည်ဟုဆိုလို နည်းသော ဓါတ်ပုံတွေကိုအာရုံစူးစိုက်။ မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ဖော်ပြထားသော vanilla porn ကြောင့်ပျင်းရိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Moholy & Prause ရဲ့မဖွယ်မရာညစ်ညမ်းတဲ့သုံးစွဲသူတွေဟာ“သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှုများ။ " ယင်းအစားသူတို့သည် vanilla porn ၏ပုံရိပ်များကိုလေ့ကျင့်ခြင်းခံရသည်။
မကြာခဏညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်သည်းခံစိတ်ကိုဖွံ့ဖြိုးရန်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်တူညီသောနှိုးဆွမှုအတိုင်းအတာကိုရရှိရန်ပိုမိုနှိုးဆွမှုလိုအပ်သည်။ အလားတူဖြစ်စဉ်ကိုအတူတူမြင့်မားတဲ့အောင်မြင်ရန်ပိုကြီး "hits" လိုအပ်သူကိုပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအတွက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများနှင့်အတူ၊ အသစ်သောသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်သောလိင်အမျိုးအစားများသို့မြင့်တက်လာခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုလှုံ့ဆော်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။
ထိတ်လန့်, အံ့သြစရာ, မျှော်လင့်ချက်ချိုးဖောက်သို့မဟုတ်ပင်စိုးရိမ်စိတ်သွေးဆောင်ကြောင်းနယူးအမျိုးအစားများအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရှောင်သောသူတို့အအတွက်အရာကိုမကြာခဏအလံ, လိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့်ဖို့အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးက မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုကိုတွေ့ ထိုကဲ့သို့သောတင်းမာမှုလျှော့ချဒီနေ့ရဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်အလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းကောက်ယူလူ 49% "အဲဒီညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမဟုတ်ခဲ့။ " အတိုချုပ် မျိုးစုံလေ့လာမှုများ မကြာခဏညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများအလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ - စွဲပုံစံနှင့်လုံးဝကိုက်ညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှု။
အဓိကအချက်: ဂါလာအတွက်ပြန်ကြားချက်ရှိဤပြောဆိုချက်တစ်ခုလုံးသည်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ” တွေ့ကြုံသင့်သည့်မထောက်ခံသည့်ခန့်မှန်းချက်အပေါ်တွင်မူတည်သည် သာ. ကြီးမြတ်လိင်စိတ်နိုးထ အရှင်ငြိမ် vanilla porn ၏ပုံများ, နှင့်ရန် သူတို့ရဲ့ arousal ထိန်းချုပ်ဖို့လျော့နည်းနိုင်စွမ်း။ သို့သျောလညျး compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ်စွဲ vanilla porn နှင့်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှ သာ. ကြီးမြတ် arousal တွေ့ကြုံခံစားသောခန့်မှန်းအကြိမ်ကြိမ်သုတေသနအများအပြားလိုင်းများအားဖြင့်လိမ်ထားသည်:
40 လေ့လာမှုများကျော် လိင်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်စိတ်နိုးထသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကိုလျှော့ချဖို့ link ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း။
25 လေ့လာမှုများ လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိသည်” (အောက်တွင်ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်) ကိုပြောဆိုခြင်းကိုတန်ပြန်ပါ။
75 လေ့လာမှုများ link ကိုကျော် အနိမ့်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်မှုနှင့်အတူ porn အသုံးပြုမှု။
ကိုးကားထားသောလေ့လာမှုနှစ်ခုသည်မည်သူသည်ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းနေသူသို့မဟုတ်မည်သူဖြစ်သည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်“ အပြာစွဲလမ်းမှု” နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဘာမျှမပြောနိုင်ပါ။
လိင်စွဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူသူများသည်ဘာသာရပ်များ (မဟုတ် van စွဲညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း) သူတို့ဟာ vanilla porn (စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည့် desensitized) ကြောင့်အလွန်ပျင်းဖို့ကောင်းသည်။
2 တောင်းဆို: စွဲအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုမှလွတ်မြောက်ရန်ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူကိုသုံးပါ
PRAUSE: "စွဲမော်ဒယ်များမကြာခဏပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်အပြုအမူအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်စေရန်သို့မဟုတ်လွတ်မြောက်ရန်အသုံးပြုသည်အဆိုပြုထား။ လိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံသူများသည်ထိန်းချုပ်မှုများထက်အခြေခံ / ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (Prause, Staley, & Fong, 2013) ။
စွဲမကြာခဏအနုတ်လက္ခဏာ (စိတ်ခံစားမှု) ကိုထိခိုက်မှလွတ်မြောက်ရန်အသုံးပြုကြစဉ်တွင်, တစ်ဖန် Gola ဖို့စာပြန်ရန်ထောက်ခံမှုအဖြစ်အထက်စွဲခန့်မှန်းတိမ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုကိုးကား။ Prause, Staley & Fong 2013 အားလုံးမှာဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းဆန်းစစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဤတွင်အမှန်တကယ်အစီရင်ခံသောအရာ:
"မမျှော်လင့်ဘဲ VSS-P အဖွဲ့သည်လိင်ရုပ်ရှင်အပေါ်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောသက်ရောက်မှုများသိသိသာသာလျော့နည်းကြောင်း VSS-C ထက်ပြသခဲ့သည်။ "
ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း -“ စွဲလမ်းသူများ” ဟုခေါ်သည့် (VSS-P အုပ်စု) သည်ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့ (VSS-C) ထက်စာလျှင်စိတ်ခံစားမှုနည်းသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် "စွဲလမ်းသူ" များသည်လိင်နှင့်ကြားနေရုပ်ရှင်များတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနည်းပါးသည်။ အဓိကအချက်: Prause ရဲ့ 2013 လေ့လာမှု ကဲ့သို့တူညီသောဘာသာရပ်များကိုအသုံးပြု Prause et al ။, 2015တွေ့သောအလွန်တူညီ 2015 EEG လေ့လာမှုဖြစ်သော နည်းသော vanilla porn ၏ငြိမ်ပုံရိပ်တွေဖို့ဦးနှောက်ကို Activation ။
vanilla porn ကိုကြည့်ရှုရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနည်းသော "မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများ" အတွက်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ရှင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ Vanilla ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်ဟုမှတ်ပုံတင်မရှိတော့ပါ။ ကြားနေရုပ်ရှင်များတွင်“ မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများ” ၏တုန့်ပြန်မှုသည်လည်းအလားတူဖြစ်သည်။ ချီးကျူး, Staley, & Fong, 2013 (လညျးချေါတ Prause et al။ , 2013) နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခဲ့ ဤနေရာတွင် critiqued.
ကိုးကားအဆိုပါလေ့လာမှု porn စွဲမော်ဒယ်များ၏မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှုနဲ့ဘာမှရှိသည်။
အဆိုပါ3Prause လေ့လာရေး (Prause et al ။, 2013, Prause et al ။, 2015, သံမဏိ et al ။, 2013 ။) အပေါငျးတို့သပါဝင် တူညီတဲ့ဘာသာရပ်များ.
ဤတွင် Prause ၏လေ့လာမှု (“ Prause Studies”) တွင်ပါဝင်သော“ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ” နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အရာ - ၎င်းတို့သည်စွဲလမ်းသူများမဟုတ်ကြပါ၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်စွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်မည်သည့်အရာကိုမဆို“ မှားယွင်း” စေရန်တရားဝင် အသုံးပြု၍ မရပါ။ အုပ်စုတစ်စုအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်စွဲလမ်းမှုပုံစံ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော vanilla porn ကိုအာရုံမစိုက်ဘဲနေလေ့ရှိကြသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုစီဒီမှာ တကယ်တော့ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများ
လေ့လာမှုသုံးခုမှရှင်းလင်းပြတ်သားသောပုံစံပေါ်ထွက်လာသည် -“ ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းသောအသုံးပြုသူများ” သည် vanilla porn ကိုအထင်မကြီးခြင်းသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခြင်းခံရသည်။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုထိရောက်စွာတုံ့ပြန်သူများသည်အမှန်တကယ်လူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်၎င်းတို့သည် desensitized (စွဲလမ်းမှု၏အဖြစ်များသောအရိပ်အယောင်) နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်သောသဘာဝဆုလာဘ် (လက်တွဲဖော်လိင်) မှအတုလှုံ့ဆော်ခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဤရလဒ်များကိုညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုမှားယွင်းစေသည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။
သင်၏ "ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ" သည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများမဟုတ်လျှင်သင်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုမမှန်မကန်ပြုလုပ်နိုင်သည်
Prause လေ့လာမှု၏အဓိကအားနည်းချက်မှာ Prause ၏ဘာသာရပ်များသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ဆိုပါကအမှန်တကယ်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများဖြစ်သည်ကိုမည်သူမျှမသိရှိနိုင်ပါ။ ဤလေ့လာမှု ၃ ခု၏ဖော်ပြချက်များတွင်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူများ” ပတ် ၀ န်းကျင်၌ကိုးကားအမှတ်အသားများမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ဘာသာရပ်များကိုအိုင်ဒါဟိုပြည်နယ်၊ ပိုတိုတယ်လိုမှအွန်လိုင်းကြော်ငြာများမှတဆင့်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိကြုံနေရပြဿနာများ။ "Pocatello, အိုင်ဒါဟို 50 ကျော်% Mormonism ဖြစ်ပါသည်, ထိုဘာသာရပ်များ၏ဤမျှလောက်များစွာသောကြောင်းခံစားရပေမည် မည်သည့် porn အသုံးပြုမှုပမာဏကြီးမားသောပြဿနာတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး 2013 အင်တာဗျူးတွင် နီကိုးလ် Prause (သူတို့ porn စွဲမကိုဆိုလိုသည်) ကိုသူမ၏ဘာသာရပ်များ၏နံပါတ်သာအသေးစားပြဿနာတွေကြုံတွေ့ကြောင်းဝန်ခံသည်:
"ဒီလေ့လာမှုကိုပြproblemsနာများအစီရင်ခံတင်ပြသူတွေကိုသာပါဝင်သည်, အတော်လေးအသေးစားကနေအထိ ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့၊ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုသူတို့ရဲ့ကြည့်ရှုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါ
ထပ်မံ၍ လေ့လာမှု (၃) ခုတွင်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” (Sexual Compulsivity Scale) ကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည် porn စွဲများအတွက်စိစစ်မှုတူရိယာအဖြစ်အတည်ပြုမပေး။ ဒါဟာ 1995 အတွက် created နှင့်ထိန်းအကွပ်မဲ့လိင်ကိစ္စနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် ဆက်ဆံရေး အေအိုင်ဒီအက်စ်ကပ်ရောဂါစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့် ဆက်စပ်. စိတ်တွင်, (မိတ်ဖက်နှင့်အတူ) ။ အဆိုပါ SCS ပြောပါတယ်:
ထို့အပြင် Prause လေ့လာမှုများသည်အမျိုးသမီးများအတွက်မေးခွန်းလွှာများကိုစီမံပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း SCS ကိုတီထွင်သူကဤကိရိယာသည်အမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်ပညာပြသခြင်းကိုပြလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသတိပေးသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုရမှတ်များနှင့်အခြားစိတ်ပညာဆိုင်ရာအမှတ်အသားများအကြားဆက်နွယ်မှုသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုပြသခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsivity ယောက်ျားအတွက်စိတ်ပညာ၏အညွှန်းကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် ဒါပေမယ့်မရအမျိုးသမီး။ "
porn စွဲခဲ့ဘာသာရပ်များ၏အရာထူထောင်မဟုတ်ထို့အပြင် Prause လေ့လာရေးလုပ်ခဲ့တယ် စိတ်ရောဂါ, compulsive အပြုအမူတွေ, သို့မဟုတ်အခြားစှဲများအတွက်ဘာသာရပ်များမျက်နှာပြင်မဟုတ်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုအပေါ်မည်သည့်“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ နောက်ထပ်ဆိုးဝါးသောအပြစ်အနာအဆာတစ်ခုမှာ Prause လေ့လာမှုဘာသာရပ်များသည်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်7Non-လိင်ကွဲအပါအဝင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး,ဒါပေမယ့်အားလုံးစံ, ဖြစ်နိုင်သည်စိတ်မဝင်စား, အထီး + အမျိုးသမီး porn ပြသခဲ့ကြသည်။ ဤသည်တစ်ဦးတည်းမဆိုတွေ့ရှိချက် discounts ။ အဘယ်ကြောင့်? လေ့လာမှုဖြစ်သည့်အကြောင်းပြီးနောက်လေ့လာမှု အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးသိသိသာသာရှိသည် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်မှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု။ လေးနက်စွဲသုတေသီများဂရုတစိုက်ဘာသာရပ်များကိုက်ညီဘယ်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်။
Gola ဖို့စာပြန်ရန်အတွက်ကိုးကားအဆိုပါလေ့လာမှု (Prause et al ။, 2013) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းစေသောညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများ၏လှုံ့ဆော်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူများသည်အပျက်သဘောခံစားချက်များမှလွတ်မြောက်ရန် porn ကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိအသုံးပြုသည်ကို၎င်းသည်သေချာစွာစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါ။
အဆိုပါ Prause လေ့လာရေးအဆိုပါဘာသာရပ်များ porn စွဲခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်မရှိမရှိအကဲဖြတ်ခဲ့ပါဘူး။ စာရေးသူဟာဘာသာရပ်များအများအပြားနည်းနည်းအခက်အခဲအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များအားလုံး Non-porn စွဲ၏အုပ်စုတစုနှင့်အတူတရားဝင်နှိုင်းယှဉ်ခွင့်ရှိခဲ့အတည်ပြုခဲ့သည် porn စွဲရှိသည်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
အားလုံးတရားဝင်ဦးနှောက်လေ့လာမှုများတိကျနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဘာသာရပ်များရှိရမည်။ အဆိုပါ Prause လေ့လာရေးဘူးကတည်းကရလဒ်စိတ်မချရဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဘာမှတွင်မှအမှားဖို့အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
တောင်းဆိုချက် ၃ - စွဲလမ်းသောလိင်စွဲစွဲလမ်းသူများတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်း
PRAUSE: ထိုအတောအတွင်း Prause et al ။ ထုတ်ဝေပြီးကတည်းကနောက်ထပ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမော်ဒယ်လ် ၂ ခုသည် ပို၍ ထောက်ခံမှုရရှိခဲ့သည်။ (2015) ။ ဤရွေ့ကားမြင့်မားသောလိင် drive ကိုမော်ဒယ် (Walton, Lykins, & Bhullar, 2016) မူရင်း High-drive ကိုအယူအဆကိုထောက်ပံ့ (Steele, Prause, Staley, & Fong, 2013) တို့ပါဝင်သည်။ Parsons et al ။ (2015) ကမြင့်မားသောလိင် drive ကိုသူတို့အားအစီရင်ခံပြproblemsနာများ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုခဲ့ကြသည်။
အပြာနှင့်လိင်စွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” သာရှိသည်ဟုဆိုသောစွပ်စွဲချက်သည်မှားယွင်းသည် မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ 25။ တကယ်တော့, နီကိုးလ် Prause ဤသည်၌ဖော်ပြထား Quora post ကို သူမသည်လိင်စွဲလမ်းသူများ၌မြင့်မားသောလိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုများရှိသည်ဟုမယုံကြည်တော့ကြောင်း -
မည်သည့်လေ့လာမှုကိုမဆိုလေ့လာခဲ့ပါစေလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်မြင့်မားသောလိင်အလိုဆန္ဒသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်သီးသန့်ဖြစ်သည်ဟူသောမှားယွင်းသောပြောဆိုမှုများကိုဖြေရှင်းရန်အရေးကြီးသည်။ အခြားစွဲလမ်းမှုအပေါ်အခြေပြုသည့်ယူဆချက်ကိုစဉ်းစားပါကယင်း၏ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့မှုသည်ရှင်းလင်းလာသည်။ (ပိုမိုသိရှိလိုပါက၏ဤဝေဖန်မှုကိုကြည့်ပါ သံမဏိ၊ ချီးကျူးခြင်း၊ 2013 မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ 'သို့မဟုတ်' မျှသာ '' တစ်ဦးစွဲ? မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန် သံမဏိ et al ။, 2013) ။ ဥပမာ၊ ထိုကဲ့သို့သောယုတ္တိဗေဒကအသည်းအသန်အဝလွန်ခြင်း၊ အစာမစားနိုင်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းမပျော်နိုင်ခြင်းသည်“ အစာကိုအလွန်လိုချင်သည်” ဟုဆိုလိုပါသလော။
နောက်ထပ်စိတ်ဖြာ။ အရက်သမားများသည်အရက်ကိုအလွန်လိုချင်ကြသည်ဟုကောက်ချက်ချရမည်လော။ အမှန်မှာစွဲလမ်းသူအားလုံးသည်သူတို့၏စွဲစေသည့်အရာများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ (“ ခေါ်ခြင်း” ကို)“ အလွန်အလိုရှိကြသည်” ဖြစ်သည်။ာင်းအခြားစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကြောင့် ၄ င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုပျော်မွေ့နေသည့်တိုင်“) ။desensitization) ။ သို့သော်၎င်းသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုကို (ပယ်ဖျက်ပေးသည့်ရောဂါရှိနေဆဲ) ကိုမပယ်ဖျက်နိုင်ပါ။
အများစုမှာစွဲကျွမ်းကျင်သူများက "အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းအသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်"စွဲ၏ချုပ်အမှတ်အသားဖြစ်။ အမှန်မှာ၊ တစ်စုံတစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်နိုင်ပြီးသူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်လူမှုရေးစွမ်းရည်များအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်သူ၏မိခင်၏မြေအောက်ခန်းတွင်ကွန်ပျူတာကိုစွန့်လွှတ်။ မရပါ။ သို့သော်ဤသုတေသီများအဆိုအရသူသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” ကိုဖော်ပြနေ သ၍ သူ၌စွဲလမ်းမှုမရှိပါ။ ဤအယူအဆသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောသိသမျှအရာများ၊ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အပြုအမူများအပါအ ၀ င်လျစ်လျူရှုထားသည် အားလုံးစွဲနေဖြင့် sharedထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန်အနုတ်လက္ခဏာဂယက်ရိုက်, အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, မတရားသော, စသည်တို့အဖြစ်.
အထက်ပါ“ မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ” ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံသည့်လေ့လာမှုသုံးခုကိုပိုမိုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
1. သံမဏိ၊ ချီးကျူးခြင်း၊ 2013 (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ရူးနှမ်း neurophysiological တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်):
ကျနော်တို့အထက်တွင်ဤလေ့လာမှုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် (သံမဏိ et al ။, 2013) ။ 2013 အတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနီကိုးလ် Prause အကြောင်းကိုနှစ်ခုကလက်ခံအများပြည်သူတောင်းဆိုမှုများလုပ် သံမဏိ et al ။, 2013:
ဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုသည်အခြားစွဲလမ်းသူများနှင့်တွေ့ရခြင်းနှင့်ကွဲပြားသည် (ကိုကင်းစံနမူနာခဲ့)
မကြာခဏဆိုသလိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသုံးစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်း” မျှသာဖြစ်သည်။
ပြောဆိုချက်ကို #1ဘာသာရပ်များခေတ္တညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ) ယင်းလေ့လာမှုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်းစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးမွငျ့မား P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပါ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာ 8 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများအတိုင်း, porn စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါသည် သံမဏိ et al ။ (ကရှင်းပြခဲ့သည်1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) နှင့်စိတ်ပညာပါမောက္ခဂုဏ်ထူးဆောင် ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်ထောက်ပြ တစ်ဦး 2013 အောက်မှာမှတ်ချက်အတွက် စိတ်ပညာယနေ့တွင် Prause အင်တာဗျူး:
လိင်စွဲလမ်းမအမြင်ရှိသူဒေါက်တာဂျွန်ဆင်, အဆိုပါ Prause အင်တာဗျူးအောက်မှာပြင်းထန်စွာတစ်စက္ကန့်အချိန် commented:
ပြောဆိုချက်ကို #2လေ့လာမှုမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအလွန်မြင့်မားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ နည်းသော မိတ်ဖက်လိင်ဆန္ဒ။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင်၊ ဦး နှောက်ကိုပိုမိုတက်ကြွစေနိုင်တဲ့သူတွေကယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာထက်လိင်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာထက်ပိုသည် ဒါကမမြင့်ဘူး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလိုဆန္ဒ။ ” ကနေကောက်နုတ်ချက် ၏ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al. ဒီကနေယူ စာပေဒ 2015 ပြန်လည်သုံးသပ်:
ထို့အပြင်စိတ္တဇအတွက်စာရင်းနိဂုံး [ "မဟုတ်ဘဲ disorders ထက် hypersexuality အဖြစ်မြင့်မားတဲ့အလိုဆန္ဒ, နားလည်သဘောပေါက်ဘို့အကျိုးသက်ရောက်မှုဆွေးနွေးနေကြပါတယ်"303] (စ။ 1) P300 လွှဲခွင်ခဲ့ကြောင်းလေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်စဉ်းစားရာအရပျထဲကပုံရသည် အနုတ်လက္ခဏာ တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ဟီလ်တန် (2014) တွင်ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့, ဒီတွေ့ရှိချက် [ "တိုက်ရိုက်မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒအတိုင်း P300 ၏အနက်ကိုဆန့်ကျင်"307] ။ အဆိုပါဟီလ်တန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနောက်ထပ်တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု၏မရှိခြင်းနှင့် EEG နည်းပညာ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" အကြားခွဲခြားမှုကိုအကြံပြုနှင့် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှူ" ဟုသံမဏိ et al ဆပ်။ [uninterpretable တွေ့ရှိချက်307].
အောက်ခြေလိုင်း: အဆိုပါတွေ့ရှိချက်များ သံမဏိ et al။ , 2013 အမှန်တကယ် Gola ဖို့စာပြန်ရန်ရာ၌အခိုင်အမာတွင်မှအမှား။
2. Parsons et al။ , 2015 (, Hypersexual လိင် compulsive, ဒါမှမဟုတ်ရုံ Highly လိင် Active ကို? ဂေးနဲ့ရိုးရိုးယောက်ျားနှင့် HIV-Related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ၏သူတို့၏ Profiles သုံးခုထူးခြားသောအဖွဲ့များစုံစမ်းစစ်ဆေး):
ဂါလာအတွက်ပြန်ကြားချက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုတိုင်းလိုလိုပင်၊ ဤလေ့လာမှုသည်မည်သည့်ဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းနေသည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြောင်းကိုသာမေးခဲ့သောမေးခွန်းနှစ်ခု -“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုစကေး” (အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည်) နှင့်“ Hypersexual Disordering Inventory” အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းလွှာများတွင်အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းမပါ ၀ င်သောကြောင့်ဤလေ့လာမှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာမှမပြောနိုင်ပါ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ.
စဉ် Parsons et al ။၂၀၁၅ သည်လိင်တူချင်းဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များကလိင်စွဲလမ်းမှုသည်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာဖော်ပြသည်။ လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်အတူတူပင်ဖြစ်ပါကလူ ဦး ရေတစ် ဦး ချင်းစီ၏အုပ်စုတစ်စုသာရှိသည်။ ယင်းအစား၊ ဤလေ့လာမှုသည်ကွဲပြားသောအုပ်စုငယ်များစွာကိုအစီရင်ခံခဲ့သော်လည်းအုပ်စုအားလုံးသည်အလားတူလိင်ဆက်ဆံမှုနှုန်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ပေါ်ထွက်လာသောသုတေသနမှလိင်တူဆက်ဆံခြင်း (SC) နှင့်လိင်တူချင်းလက်ထပ်ခြင်းဆိုင်ရာရောဂါ (HD) သည်လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်နှစ်မျိုးလုံးအမျိုးသားများ (GBM) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမလိုက်နာသော၊ လိင်နှင့်လိုက်ဖက်သောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှုနှစ်မျိုးလုံးသည် SC / HD စဉ်ဆက်မပြတ်ကွဲပြားခြားနားသောပြင်းထန်မှုအဆင့်များကိုဖမ်းယူသည်။ ဤလိင်မှုကိစ္စတက်ကြွသောနမူနာများ၏ထက်ဝက်နီးပါး (၄၈.၉%) သည် SC ကိုဖြစ်စေ၊ HD ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ၃၀% က SC သာလျှင် ၂၁.၁% နှင့် SC နှင့် HD နှစ်မျိုးစလုံး ဟူ၍ အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။ ယောက်ျားလေးမိတ်ဖက်အရေအတွက်နှင့်ပတ်သက်သည့်အုပ်စုသုံးစုအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိသော်လည်းစအိုလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များ…
ရိုးရှင်း - လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည်လိင်မှုကိစ္စအားဖြင့်တိုင်းတာသည့်အတိုင်းလူတစ် ဦး သည်လိင်စွဲလမ်းသူရှိမရှိမပြောနိုင်ပါ။ ဤနေရာတွင်အဓိကတွေ့ရှိချက်မှာလိင်စွဲလမ်းမှုသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒများ” နှင့်မတူပါ။
3. Walton, Lykins, & Bhullar, 2016 (လိင်ကွဲ, ရိုးရိုးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားဖော်ပြမှုအတွက်ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေးတစ်ဦးကမတူကွဲပြားခြင်းကျော်လွန်):
အဘယ်ကြောင့်ဤ "အယ်ဒီတာမှစာ" ကိုးကားသည်အဘယ်ကြောင့်နက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း၊ Gola မှပြန်လည်ဖြေကြားသူများသည်သူတို့၏ကိုးကားချက်များကိုမသက်ဆိုင်သောစာရွက်များဖြင့်ရေးထားသလား။
ကိုးကားသုံးခုလေ့လာမှုများမဆိုဘာသာရပ် porn စွဲသို့မဟုတ်မခံခဲ့ရခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ခဲ့ပါဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုညစ်ညမ်းစွဲရိုးရှင်းစွာအမြင့်ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိသည်သောပြောဆိုချက်ကိုအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြနိုင်ပါတယ်။
သံမဏိ၊ ချီးကျူးခြင်း၊ 2013 porn ပိုမို cue-reactivity ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောခံခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံ နည်းသော တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒ။ ဤသည်ညစ်ညမ်းစွဲမြင့်မားတဲ့ရှိသည်သောပြောဆိုချက်ကို falsifies လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလိုဆန္ဒ။
Parsons et al။ , 2015 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု hypersexuality ၏အစီအမံမှမသက်ဆိုင်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လိင်စွဲလမ်းသူများသည်မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိသည်ဟုပြောဆိုခြင်းကိုမှားယွင်းစေသည်။
Walton, Lykins, & Bhullar, 2016 လက်မှာဘာသာရပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိကြောင်းအယ်ဒီတာတစ်ဦးစာတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။
4 တောင်းဆို: Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု porn အသုံးပြုမှုအများဆုံးအကြံပြုအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်
PRAUSE: စွဲမော်ဒယ်များပုံမှန်အားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအများဆုံးအသုံးပြုသောဆိုးကျိုးများဖြစ်သော်လည်းလိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် erectile ပြproblemsနာများသည်အမှန်တကယ်မြင့်တက်ခြင်းမရှိပါ (Landripet & Štulhofer, 2015; Prause & Pfaus, 2015; Sutton, Stratton, Pytyck, Kolla, & Cantor, 2015) ) ။
"erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၏အနှုတ်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်ဖြစ်သည်" ဆိုသောအဆိုမှာထောက်ခံမှုမပါဘဲဖြစ်သည်။ အဲဒါပါ ကောက်ရိုးလူကိုအငြင်းအခုံ အဖြစ်:
အဘယ်သူမျှမသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအစဉ်အဆက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ #1 အကျိုးဆက်ကြောင်းအခိုင်အမာသိရသည်။
porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ #1 အကျိုးဆက်ဟာသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားဖူး (နှင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကောင်းဘယ်တော့မှ) ။
ဤအရေးဆိုမှုကို porn ၏အကျိုးဆက်များမှကိုယ်နှိုက်ကန့်သတ် အသုံး, porn ၏အကျိုးဆက်များကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်သောအရာ စှဲမွဲမှု.
ဘယ်လိုလဲ တတျနိုငျသ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု porn ၏ #1 အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်ဖြစ် အသုံး လူဦးရေရဲ့အမျိုးသမီးတဝက်ချန်လှပ်သောအခါ? မဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုအရေအတွက်ကတဦးတည်းအကျိုးဆက်ဖြစ်လျှင်အမျိုးသမီးထည့်သွင်းရန်အဖြစ်ဒါကြောင့်နိမ့်လိင်စိတ်သို့မဟုတ် anorgasmia ဖြစ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
: မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တစ်ဦးတည်းသာထိုသုံးဦးလေ့လာမှုများ၏အမှန်တကယ်ရှိလျှင်, porn စွဲသောဘာသာရပ်များဖော်ထုတ်ကိုးကား Sutton, Stratton, Pytyck, Kolla, & Cantor, 2015 ။ အမှန်စင်စစ်ဤဖြစ်ပါသည် သာ လေ့လာမှု porn စွဲအဖြစ်မည်သည့်လေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုသတ်မှတ်ကြောင်း Gola မှတစ်ခုလုံးကိုစာပြန်ရန်အတွက်ကိုးကား။ ဒီနေရာမှာကိုးကားနှစ်ခုကတခြားလေ့လာမှုတွေ (Landripet & Štulhofer, 2015; ချီးကျူးခြင်း & Pfausမည်သည့်ဘာသာရပ် porn စွဲသို့မဟုတ်မခံခဲ့ရခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်မကြောင့်၎င်း, 2015) ကျွန်တော်တို့ကိုညစ်ညမ်းစွဲနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမပြောပါ။ အကျွမ်းတဝင်အသံ?
Sutton, Stratton, Pytyck, Kolla, & Cantor, 2015 (115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာလက်ခဏာ):
၎င်းသည် paraphilias နှင့်နာတာရှည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းစသည့် hypersexuality မမှန်မှုများကိုကုသရန်အမျိုးသားများ (ပျမ်းမျှအသက် ၄၁.၅) အမျိုးသားများအတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၇ ယောက်ကို“ ရှောင်နိုင်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် (ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြင့်) တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်နာရီ ၇ နာရီအထက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါ compulsive porn အသုံးပြုသူ 71% 33% အစီရင်ခံနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုသတင်းပို့ (porn-သွေးဆောင် ED မှမကြာခဏရှေ့ပြေး) ။
ကျန်ရှိနေသေးသောအမျိုးသားများ၏ ၃၈% သည်မည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသနည်း။ ဒီလေ့လာမှုကမပြောနိုင်ပါဘူး၊ ပြီးတော့စာရေးသူတွေကအသေးစိတ်တောင်းခံရန်ထပ်ခါတလဲလဲတောင်းဆိုမှုများကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည် ဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုမှာယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အဓိကရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကတော့ ED နဲ့ libido နည်းတယ်။ ထိုအမျိုးသားများသည်၎င်းတို့၏ erectile လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းမခံခဲ့ရပါ ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ. ယောက်ျားများသည်လိင်ဆက်ဆံမှုမရှိသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုသည်နှင့်လိင်မှုကိစ္စမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပါ ၀ င်ပါကယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းသော ED လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံယူရန်စိတ်ကူးမရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာလိင်အရပြproblemsနာသည် ၇၁% ထက်ပိုများသည်။ ဂါလာအားတုံ့ပြန်မှုကဤလေ့လာမှုကို“ အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များ” သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိကြောင်းသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နေဆဲဖြစ်သည်။
Sutton et al ။, 2015 နေဖြင့်ပုံတူကူးယူထားသည် တစ်ခုတည်းသောသည်အခြားလေ့လာမှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပြpornနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသုံးစွဲမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ ထိပ်တန်းသုတေသနတက္ကသိုလ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ပြpornနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည် erectile function ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ သို့တိုင်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသုံးစွဲသူများသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်စွဲလမ်းမှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အမျိုးသား ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤလေ့လာမှုသည်အရှိန်မြင့်တက်နေသည်ဟုအစီရင်ခံရသည်။ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမဟုတ်ခဲ့။ "
တကယ်တော့, 30 လေ့လာမှုများကျော် porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အကြားကဒီ link ကိုပုံတူကူးယူသို့မဟုတ်လိင်စိတ်နိုးထလျော့နည်းသွားခဲ့ကြသည်။ ကြောင်းစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး5လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျော် 60 လေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည် လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချရန်။ ကျွန်တော့်ကို“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေ” လိုခံစားရတယ်။
“ ညစ်ညမ်းသော” ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများသည်“ စွဲလမ်းမှု” ၏တည်ရှိမှုနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိသော်လည်း၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောပထမလေ့လာမှုနှစ်ခုသည်ဆန်းစစ်ချက်အရ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လက်ရှိအသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်အကြားဆက်နွယ်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
ပထမ ဦး စွာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ စ၍ ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများအားလိင်မှုကိစ္စကိုအကဲဖြတ်သည့်လေ့လာမှုများတွင်သမိုင်းဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုအဆင့်များနှင့်အသစ်သောလိင်စိတ်နိုးထမှုနှုန်းနိမ့်ကျသောနှုန်းများကိုဖော်ပြထားသည်ကိုသိရှိရန်အရေးကြီးသည်။ အားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည် ဒီ 2016 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ။
ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015 (မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှုနှင့်အတူလိင်လှုံ့ဆော်မှု Associated, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်ကိုကြည့်ရှုခြင်း):
ဒီညစ်ညမ်းစွဲအဖြစ်စက္ကူကိုမဆိုဘာသာရပ်များခွဲခြားသတ်မှတ်မပြုခဲ့အတူတကွ cobbled ကတည်းက၎င်း၏တွေ့ရှိချက် porn စွဲမော်ဒယ်မှားယွင်းစေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်သောပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံလို့မရပါဘူး။ ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ၂၀၁၅ ဆိုတာလုံးဝမလေ့လာခဲ့ပါဘူး။ Prause ကသူမ၏အစောပိုင်းလေ့လာမှုလေးခုမှအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခဲ့သည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်၊ အပိုဆောင်းပြproblemနာ: အများ၏ဒေတာအဘယ်သူမျှမ ချီးကျူးခြင်း & Pfaus (2015) စက္ကူလေးပါးအစောပိုင်းကလေ့လာမှုများအတွက် data တွေကိုကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ အဆိုပါကှာဟသေးသေးမဟုတ်ဖြစ်ကြပြီးရှင်းပြခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
သုတေသီရစ်ချတ်အေ Isenberg က MD ကမှတ်ချက်အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာပွင့်လင်း Access ကို, အဆိုပါကှာဟ, အမှားအယွင်းများနှင့်မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများအများအပြား (သို့သော်အားလုံးမဟုတ်) ထုတ်ထောက်ပြ (က Lay ဝေဖန်မှုကိုပိုမိုကှာဟဖော်ပြထားတယ်) ။ Nicole Prause & Jim Pfaus သည်ဤစာတမ်းနှင့်ဆက်နွယ်သောမှားယွင်းသောသို့မဟုတ်မထောက်ခံသောပြောဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုနဲ့ပါတ်သက်ပြီးစာနယ်ဇင်းသမားတွေရဲ့ဆောင်းပါးတွေကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုခဲ့သည် ပိုကောင်း စိုက်ထူ, သေးသောစက္ကူကိုတွေ့သောအရာကိုမဟုတ်ပါဘူး။ မှတ်တမ်းတင်အင်တာဗျူးမှာတော့နီကိုးလ် Prause နဲ့ Jim Pfaus နှစ်ဦးစလုံးမဟုတ်မမှန်သူတို့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာစိုက်ထူတိုင်းတာခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားသည်နှင့် porn ကိုသုံးသူယောက်ျားပိုကောင်းစိုက်ထူခဲ့။ ထဲမှာ ဂျင်မ် Pfaus တီဗီအင်တာဗျူး Pfaus ကဤသို့ဆို၏:
သို့သျောလညျးဤစာတမ်းဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာစိုက်ထူအရည်အသွေးသို့မဟုတ် "စိုက်ထူ၏မြန်နှုန်း" ကိုအကဲဖြတ်ရန်ခဲ့ပါဘူး ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုခေတ္တကြည့်ရှုပြီးနောက်ယောက်ျားများအားသူတို့၏“ နှိုးဆွမှု” ကိုသတ်မှတ်ရန်သာတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ စာတမ်းများသည်ဘာသာရပ်အားလုံး၏ဖြစ်ရပ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်နောက်ခံစာတမ်းများမှမရှင်းလင်းပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စာရွက်မှကောက်နုတ်ချက်သည် -
တတိယကလက်ခံပြောဆိုချက်ကို: ဒေါက်တာ Isenberg ကဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အံ့ဩ ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ '' နှိုးဆွအဆင့်ဆင့်လာသောအခါသုံးနှိုင်းယှဉ်ကြပါပြီ 2015 ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများအတွက်4အခြေခံလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများတစ်3မိနစ်ရုပ်ရှင်, တဦးတည်းလေ့လာမှုတစ်ခု 20-ဒုတိယရုပ်ရှင်အသုံးပြုသောနှင့်တဦးတည်းလေ့လာမှုနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာမြဲမြံစွာတည်င့် ရုပ်ရှင် ပို. arousal ဓာတ်ပုံများထက်များမှာထို့ကြောင့်မည်သည့်တရားဝင်သုတေသနအဖွဲ့ကမျှထိုတုန့်ပြန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်ဤဘာသာရပ်များကိုအတူတကွစုစည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာကသူတို့ရဲ့စက္ကူ Prause & Pfaus မှာလေ့လာချက် ၄ ခုစလုံးကလိင်ရုပ်ရှင်တွေကိုသုံးခဲ့တယ်လို့မရေရာပါဘူး။
တစ်ဦးကစတုတ္ထမထောက်ပံ့ပြောဆိုချက်ကို: ဒေါက်တာ Isenberg လည်းဘယ်လိုမေးလျှင်, ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ '' နှိုးဆွအဆင့်ဆင့်လာသောအခါ 2015 ခုနှစ် သာ 1 တစ်အသုံးပြုသော4အခြေခံလေ့လာမှု 1 စကေးမှ9။ တစ်ခုက ၀ မှ ၇ စကေးကိုသုံးတယ်၊ တစ်ခုက ၁ မှ ၇ စကေးကိုသုံးတယ်၊ လေ့လာမှုတစ်ခုကလိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုမဖော်ပြဘူး။ Prause & Pfaus သည်ထပ်မံရှင်းပြ။ မရနိုင်ပါ။
အခြေခံစာတမ်းများကိုပြအဖြစ်ဤသည်လည်းအယူမှားပါပဲ။ အချုပ်အားညစ်ညမ်းတိုးတက်မှုစိုက်ထူသို့မဟုတ် arousal, ဒါမှမဟုတ်တခြားဘာမှအကြောင်းလူအပေါင်းတို့သည် Prause-generated ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်, တခုခုဖြစ်နေတာကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015 လည်းသူတို့ erectile လည်ပတ်ရမှတ်များနှင့်ပြီးခဲ့သည့်လ၌ကြည့်ရှုအားပေး porn ၏ပမာဏအကြားအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ပြောဆိုထားသည်။ ဒေါက်တာ Isenberg ထောက်ပြအဖြစ်:
Dr. Isenberg ၏ဝေဖန်မှုကို Prause & Pfaus ၏တုန့်ပြန်မှုအရ ၄ င်းတို့သည်“ ခိုင်မာသောခိုင်လုံသောဖော်ပြချက်” ကိုအထောက်အပံ့ပေးရန်အချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာထပ်မံမပေးခဲ့ပါ။ အဖြစ် ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစာရွက်စာတမ်းများ, Prause & Pfaus တုန့်ပြန်ချက်သည်ဒေါက်တာ Isenberg ၏တရားဝင်စိုးရိမ်မှုများကိုရှောင်ရှားရုံမကများစွာပါ ၀ င်သည် အသစ် မှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်အတော်ကြာလင်းမြင်သာမှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ခုနစျပါးကိုအမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များအားဖြင့်စာပေ၏သုံးသပ်ချက် အပေါ် commented ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015:
Landripet & Štulhofer 2015 (ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူဖြစ်သနည်း တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်ဆက်သွယ်ရေး):
နှင့်ဝသကဲ့သို့ ချီးကျူးခြင်း & Pfaus, 2015, ဒီ "အတိုချုပ်ဆက်သွယ်ရေး" ညစ်ညမ်းစွဲအဖြစ်မည်သည့်ဘာသာရပ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများမရှိခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုအတုမခိုးနိုင်ပါ။ ဂါလာအားပြန်ကြားချက်ကပြောဆိုခဲ့သည် Landripet & Štulhofer, 2015 porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအကြားမျှဆက်ဆံရေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအတွက်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်ဤစကားမှန်သည်မဟုတ် ဒီ YBOP ဝေဖန်မှု နှင့် စာပေဒကိုအမေရိကန်ရေတပ်ပြန်လည်သုံးသပ်:
တစ်ဦးကစက္ကန့်စက္ကူနော်ဝေး, ပေါ်တူဂီများနှင့်ခရိုအေးရှားကနေလိင်တက်ကြွယောက်ျားအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ပညာရေးနှုန်းထားများအကြားအနည်းငယ်သာဆက်စပ်မှုအစီရင်ခံ  ။ အသီးသီး 40% နှင့် 31% အဖြစ် ED နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှုန်းထားများအဖြစ်မြင့်မားသောတွေ့ရှိခဲ့အမှန်ပင်ယခင်စာရွက်သူများ, ယောက်ျား 37 နှင့်အောက်တွင် ED ၏မြင့်ပျံ့နှံ့အသိအမှတျပွုနှင့်မတူဘဲဤစာရေးဆရာများ။ ဆနျ့ကငျြ, စက္ကူရဲ့စာရေးဆရာတဦးအားဖြင့် 2004 ၌ပြစ်မှားမိ Pre-streaming ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုတေသန [ယောက်ျား 5.8-35 သာ 39% ၏ ED နှုန်းထားများအစီရင်ခံတင်ပြ58] ။ သို့သျောလညျး, တစ်ဦးစာရင်းအင်းနှိုင်းယှဉ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်စာရေးဆရာများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနုပျို ED များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်မထင်ထားဘူးကြောင်းကောက်ချက်ချ။ ဒါကသူတို့စစ်တမ်းကောက်ယူပျေါတူဂီယောက်ျားနော်ဝေနှင့် Croatian နှင့်နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏နိမ့်ဆုံးနှုန်းဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ပေါ်တူဂီသာ 40% ကိုနော်ဝေနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက "နေ့စဉ်ဖို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်ကနေ" အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသုံးပြီးအစီရင်ခံကြောင်းပေးထား, အလွန်အမင်းပြတ်သားပုံရသည် , 57% နှင့် Croatian, 59% ။ ဤစာတမ်းသည်တရားဝင် [အလုပ်မှာဖြစ်လူသိများသို့မဟုတ်တွေးဆ variable တွေကိုအကြားတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်နှစ်ဦးစလုံးဆက်ဆံရေးပတ်ဝိုင်းနိုင်ပြည့်စုံမော်ဒယ်များ employ ပျက်ကွက်မှုအတွက်ဝေဖန်ထားသည်59] ။ စကားမစပ်, ပြဿနာအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအပေါ်တစ်ဦးဆက်စပ်စာရွက်ထဲမှာ တူညီသောစစ်တမ်းသင်တန်းသားများကိုအများအပြားပါဝင်သော ပေါ်တူဂီ, ခရိုအေးရှားနှင့်နော်ဝေကနေလူတို့သညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားကသူတို့ပြဿနာမရှိခြင်းလှူဒါန်းခဲ့သူတို့ယုံကြည်သည်မြောက်မြားစွာအချက်တွေထဲကအရာဟုမေးခဲ့သည်။ သည်အခြားအကြောင်းရင်းများအနက်မှန်းခြေ 11% -22% [ "ငါသိပ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်" နှင့် 16% -26% "ငါအရမ်းမကြာခဏ masturbate" ကို ရွေးချယ်. ရှေးခယျြခဲ့60].
ရေတပ်ဆရာဝန်များဖော်ပြသည့်အတိုင်းဤစာတမ်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် - ပေါ်တူဂီအမျိုးသား ၄၀% သာ porn ကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်းနော်ဝေလူမျိုး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် porn ကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ ပေါ်တူဂီအမျိုးသားများသည်နော်ဝေလူမျိုးများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမပြည့်စုံမှုနည်းပါးသည်။ Croats မှလေးစားမှုနှင့်အတူ Landripet & Štulhofer, 2015 ပိုပြီးမကြာခဏ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပညာရေးအကြားတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ဝန်ခံပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်ဤပြောဆိုချက်ကိုလိမ္မာစာရငျးအငျးပညာသည်နှင့်များစွာသောလေ့လာမှုတွေရေးသားခဲ့သူတစ်ဦးက MD အဆိုအရလှည့်စားစေခြင်းငှါ:
ဖြည့်စွက်ကာ, Landripet & Stulhofer 2015 စာရေးသူတစ်ဦးမှပေးအပ်ရာနှစ်ခုကိုသိသိသာသာဆက်စပ်, ချန်လှပ် ဥရောပညီလာခံ။ သူက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှစ်သက်ခြင်းတို့အကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
“ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ညစ်ညမ်းတဲ့လိင်ဆိုင်ရာအမျိုးအစားများအတွက် ဦး စားပေးသတင်းပို့တာက သိသိသာသာ erectile နှင့်ဆက်စပ် (သို့သော် ejaculatory သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒ-related မဟုတ်) အထီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ "
အဲဒါပြောနေတာပါ Landripet & Stulhofer သူတို့ရဲ့စက္ကူကနေညစ်ညမ်း၏တိကျသောအမျိုးအစားများများအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဦးစားပေးအကြားကဒီသိသာဆက်စပ်မှုချန်လှပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ porn အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏မူလလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာမကိုက်ညီပါဘူး, ဤအေးစက် porn ဦးစားပေးမှန်ကန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမကိုက်ညီပါဘူးတဲ့အခါမှာပညာရေးကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အမျိုးအစားများသို့မြင့်လာရန်အဘို့အဒါဟာအတော်လေးဘုံပါပဲ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ထဲမှာမင့်နောက်ဆုံးလ၌နာရီ, သို့မဟုတ်ကြိမ်နှုန်း - ငါတို့သည်နှင့်အမေရိကန်ရေတပ်အထက်ထောက်ပြကြောင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဆက်စပ်မျိုးစုံ variable တွေကိုအကဲဖြတ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုလေ့လာဆက်ဆံရေး၏ဖြစ်နိုင်သောမော်ဒသို့မဟုတ်ပြုပြီဖြေရှင်းပါဘူးမဟုတ်သလိုကြောင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပို. ပို. , ညစ်ညမ်းအပေါ်သုတေသနပြုခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုဆက်ဆံရေး၏ပြင်းအားသို့မဟုတ်ဦးတည်ချက်တွေဖြစ်တဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (ဆိုလိုသည်မှာပြုပြီ) အကြောင်းကိုမဝင်စေခြင်းငှါအရာမှတဆင့် (ဆိုလိုသည်မှာ, မော်ဒ) အဖြစ်လမ်းကြောင်းလေ့လာခဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအချက်များအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအပေါ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်တစ်ခုပါဝင်မှအကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။
အဓိကအချက် - ရှုပ်ထွေးသောဆေးကုသမှုအခြေအနေအားလုံးတွင်ခွဲခြားထားရမည့်အချက်များစွာပါဝင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Landripet & Stulhofer က“ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများ၏အလိုဆန္ဒ၊အသုံးပြုသူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အခြားအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေများကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ဝေးကွာသွားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၄ င်းတို့တွေ့ရှိခဲ့သည့်အမျိုးအစားများသို့မြင့်တက်ခြင်းအပါအ ၀ င်“ အတိုချုပ်ဆက်သွယ်ရေး” တွင်ချန်လှပ်ထားသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ tt ရဲ့အရေးကြီးတယ်ကြောင်း coauthor သတိပြုပါ နီကိုးလ် Prause ရှိပါတယ် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး နှင့်တစ် ဦး လုပ်။ ပြီးလျှင်, PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လိင်မှုကိစ္စပြတ်တောက်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များအားတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ n: ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes အတူတူ # 12, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, ဂါယူဆပါသည် #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15.
၎င်းသည်သုတေသီတစ် ဦး အတွက်ထူးခြားသောအပြုအမူဖြစ်သော်လည်း Prause တွင်ရှိသည် မျိုးစုံမှတ်တမ်းတင်ဖြစ်စဉ်များနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုအတွက်စေ့စပ် သူမ၏ကောက်ချက်နှင့်အတူသဘောမတူသူမည်သူမဆိုကဲ့ရဲ့ခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ကြောင့်လူတွေဆွဲဆောင်ဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော "astroturf" ကင်ပိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ Prause တစ်စုဆောင်းထားသည် ရှည်လျားသောသမိုင်း အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့တဲ့သူစာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကိုနှင့်အခြားသူများနှောင့်ယှက်၏။ သူမသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယား "t ကိုအရသိရသည်he XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးလုပ်နေသူများကို၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်း ၀ င်များအတွက်သီးသန့်သီးသန့်သိုမှီးထားသည့်တစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုတစ်ခုဖြစ်သည်။) ။ ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုဖြစ်ခြင်း FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး) ။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ အကွောငျး သူမ၏လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို နှင့်သူမ၏ လေ့လာမှုရဲ့နည်းစနစ်။ ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
5 တောင်းဆို: ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများသည်ဘုရားမဲ့ဝါဒီထက်သူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်ပိုပြီးဒုက္ခဆင်းရဲများ
PRAUSE: ဒါ့အပြင်လိင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်နှင့်ဆက်စပ်သောဒုက္ခဆင်းရဲ (Grubbs et al ။ , 2014) အများဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှေးရိုးစွဲတန်ဖိုးများနှင့်ဘာသာရေးသမိုင်းနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ ဤသည်အပြုအမူတွေကိုကြည့်ရှုပြဿနာလိင်ရုပ်ရှင်တစ်လူမှုရေးအရှက်ကွဲခြင်းမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးရန် Gola ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်သည်ပစ်မှတ်နှင့်ဝေးကွာသည်ထက်ဝေးကွာသွားသည်။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများသည်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများထက်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရကြောင်းသိသာထင်ရှားသည့်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရှိမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ဒီတွေ့ရှိချက်ကညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုဘယ်လိုမှားယွင်းစေသလဲ။ မထားဘူး ထို့အပြင်ကိုးကားလေ့လာမှုနှင့်အတူသူ့ဟာသူမသက်ဆိုင်ဘူးလိင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်နှင့်ဆက်စပ်သောဒုက္ခဆင်းရဲ။"
သူကဆက်ပြောသည်မှာ Joshua Grubbs (“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများ”) နှင့်ပတ်သက်သော Lay ဆောင်းပါးအတော်များများသည်သူ၏ရိပ်မိစွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများအမှန်တကယ်တင်ပြသောအရာနှင့်ဤတွေ့ရှိချက်များအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုအလွန်အထင်လွဲစေသောပုံကိုရေးဆွဲရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ဤမှားယွင်းသောဆောင်းပါးများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် YBOP မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှု ယင်းကိုရိပ်မိစွဲလေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်လှညျ့ဖွားဆောင်းပါးတွေရာ၌တောင်းဆိုမှုများ၏။
UPDATE: တစ်ဦးကလေ့လာမှုအသစ် (ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။, 2017) Joshua Grubbs မှတီထွင်ထားသည့်“ ရိပ်မိညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” မေးခွန်းလွှာဖြစ်သော CPUI-9 ကိုစမ်းသပ်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ပြီး၎င်းသည်“ အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ကိုတိကျစွာအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် or "ရူပါရုံစွဲ" (ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory-9 ရမှတ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive စဉျးစားကွညျ့သလား? Abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏အခန်းက္ပ Exploring) ။ ထို့အပြင် CPUI-1 မေးခွန်း၏သုံးပုံတစ်ပုံသည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း”၊ “ ဘာသာတရားဆိုင်ရာ” နှင့်“ ညစ်ညမ်းသောနာရီအသုံးပြုမှု” တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောခိုင်လုံသောရလဒ်များကိုပြန်ပို့ရန်ချန်လှပ်ထားသင့်သည်။ တွေ့ရှိချက်များသည် CPUI-3 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်သို့မဟုတ်၎င်းကိုအသုံးချသည့်လေ့လာမှုများအပေါ်မှီခိုခဲ့သည့်မည်သည့်လေ့လာမှုမှမဆိုကောက်ချက်အပေါ်သိသိသာသာသံသယများဖြစ်စေသည်။ လေ့လာမှုအသစ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ဝေဖန်မှုများသည်ဤကျယ်ပြန့်စွာဖော်ပြထားသောအရာများကိုထင်ဟပ်ပြသသည် YBOP ဝေဖန်မှု.
Grubbs et al ။ , 2014 (စွဲလမ်းမှုအဖြစ်လွန်ကျူး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှခံစားစွဲလမ်း၏ခန့်မှန်းအဖြစ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏):
ဤလေ့လာမှုကမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သူသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
အထက်ပါ Gola ၏ပြောဆိုချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ ဤလေ့လာမှုသည်“လိင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်နှင့်ဆက်စပ်သောဒုက္ခဆင်းရဲ။"ဟူသောစကားလုံး" ဒုက္ခဆင်းရဲ "၌မပေးပါ လေ့လာမှုရဲ့စိတ္တဇ.
Gola နှင့်ရန်ပြန်မယ်ဆန့်ကျင် Grubbs et al ။ , 2014 နိဂုံးချုပ်, porn စွဲ၏အပြင်းထန်ဆုံးခန့်မှန်းအမှန်တကယ် porn အသုံးပြုမှုနာရီခဲ့သည်, မရစျယာနျဘာသာတရားကို! မြင် ဒီကျယ်ပြန့်အပိုင်း လေ့လာမှု၏ဇယားများ၊ ဆက်စပ်မှုများနှင့်လေ့လာမှုအမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့ရာများနှင့်အတူ။
Grubbs ၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းလွှာ (CPUI-9) ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြိုခွဲလိုက်သောအခါ“ ဘာသာရေးဘာသာတရား” နှင့်အဓိကစွဲလမ်းသည့်အပြုအမူများ (Access Efforts မေးခွန်း ၄-၆) အရဆက်နွယ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမည်ဆိုလျှင်ဘာသာတရားနှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိပါ အမှန်တကယ် porn စွဲ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုနာရီ” နှင့်အကြားအလွန်ခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုရှိသည် core ကိုစွဲအပြုအမူတွေ Access Accesss မှမေးခွန်းများ ၄-၆ မှအကဲဖြတ်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ် - porn စွဲကြည့်ရှုအားပေး porn ပမာဏအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်.
ဂါလာသို့ပြန်ကြားချက်၊ ဒေးဗစ်လလေကဲ့သို့ဘလော့ဂါများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုပင်ဂရော့ဘ်စ်များသည်ဘာသာရေးအရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေပုံရသည်။ သို့သျောလညျး "ရိပ်မိစွဲ" လေ့လာမှုများဒီခေတ်မှီစကားပြောအချက်၏သက်သေသာဓကဖြစ်ကြောင်းမှန်သည်မဟုတ်။ တနည်းကား, ဒီကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အဆိုပါ debunks "porn စွဲဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းသာ" တောင်းဆိုမှု။ ဤအချက်ကိုစဉ်းစားသောအခါ meme ပြိုလဲသည်။
ဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်တွေ့ရသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ ဆနျ့ကငျြ, ယခုရှိပါတယ် 41 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲထဲမှာစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံ။
အဆိုပါရိပ်မိစွဲလေ့လာမှုများ ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၏ cross-အပိုင်းကိုမသုံးခဲ့ပါ။ အဲဒီအစား, (ဘာသာရေးသို့မဟုတ် nonreligious) လက်ရှိ porn အသုံးပြုသူများကိုသာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုများ၏သဘောအရဆိုလျှင် (ဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အနိမ့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏နှုန်းထားများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2, လေ့လာမှု 3, လေ့လာမှု 4, လေ့လာမှု 5, လေ့လာမှု 6, လေ့လာမှု 7, လေ့လာမှု 8, လေ့လာမှု 9, လေ့လာမှု 10, လေ့လာမှု 11, လေ့လာမှု 12, လေ့လာမှု 13, လေ့လာမှု 14, လေ့လာမှု 15, လေ့လာမှု 16, လေ့လာမှု 17, လေ့လာမှု 18, လေ့လာမှု 19, လေ့လာမှု 20, လေ့လာမှု 21, လေ့လာမှု 22, လေ့လာမှု 23, လေ့လာမှု 24).
ဆိုလိုသည်မှာဂရော့ဘ်စ်၏“ ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများ” ၏နမူနာသည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေများနှင့်နောက်ခံအခြေအနေများရှိသူများကိုမလွှဲမရှောင်လမ်းလွဲစေသည်
ဆိုလိုသည်မှာ“ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှု” ဟုဆိုလိုသည် မဟုတ် porn စွဲကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ပုံအစား, ယာနျဘာသာတရားကို ကာကွယ်ပေးသည် တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေတစျခု။
များသော ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့်မသိဝါဒီ porn စွဲဖွံ့ဖြိုး။ ပြီးခဲ့သည့်အတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောခဲ့သောယောက်ျားအပေါ်နှစ်ဦးကို 2016 လေ့လာမှုများ ပြီးခဲ့သည့်6လအတွင်း, ဒါမှမဟုတ်အတွက် ပြီးခဲ့သည့်3လအတွင်း, compulsive porn အသုံးပြုမှုအလွန့်အလွန်မြင့်မားတဲ့နှုန်းထား (နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများအဘို့အ 28%) ကဖော်ပြခဲ့သည်။
ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုသည်ကျန်းမာသောလူငယ်များအတွက်နာတာရှည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ လိင်စိတ်နည်းခြင်းနှင့် anorgasmia ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ သို့တိုင် မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ link ကိုညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှအသုံးပြုခြင်းနှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့် ED နှုန်းထားများနားမလည်နိုင်လောက်အောင် 1000% အားဖြင့်တဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်ပါပြီ "ပြွန်" မှ စ၍ အသက် ၄၀ မပြည့်သေးသောအမျိုးသားများသည် ၂၀၀၆ နှစ်ကုန်တွင် စတင်၍ ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူများ၏အာရုံကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။
ဤ ကုသမှု-ရှာကြံ porn စွဲအပေါ် 2016 လေ့လာမှု ကြောင်းစျယာနျဘာသာတရားကိုတွေ့ရှိခဲ့ မပတျသကျဘူး လိင်စွဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောလက္ခဏာများသို့မဟုတ်ရမှတ်များနှင့်အတူ။ ဤ ကုသမှု-ရှာကြံ hypersexuals အပေါ် 2016 လေ့လာမှု တွေ့ရှိရ အဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေး ဘာသာရေးကတိကဝတ်များနှင့် hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်အကျိုးဆက်များ၏ Self-အစီရင်ခံအဆင့်ဆင့်အကြား။
သုတေသနပြပွဲ သူတို့ရဲ့ porn စွဲတိုး၏ပြင်းထန်မှုအဖြစ်, ဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီကိုမကြာခဏ, ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်သို့ပြန်လာပိုပြီးမကြာခဏဘုရားကျောင်းတက်ရောက်နှင့် (12 ခြေလှမ်းများထင်) ပြန်လည်နာလန်ထူရှာကြံ / ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့လမ်းအဖြစ်ကိုပိုမိုကိုင်းရှိုင်းဖြစ်လာသည်။ တစ်ဦးတည်းဒီအညစ်ညမ်းစွဲနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုအကြားမည်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးများအတွက်အကောင့်နိုင်ဘူး။
အဆိုပါ Gola အခိုင်အမာမှပြန်မယ်နှင့်တစ်ခုတည်းလေ့လာမှုကိုးကားနှစ်ဦးစလုံးဟာညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်နှင့်အတူဖို့ဘာမျှမရှိသည်။
၂၀၁၄ Grubbs ၏“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ဘာသာတရားနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းမှုပမာဏနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ“ အရှက်ကွဲခြင်း” သည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေကြောင်းသက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။ သို့သော်၎င်းအပြောင်းအလဲများကိုအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရှိရသည် ပြနာရှိတဲ့ porn သုံးစွဲသူများရဲ့ ဦး နှောက်.
ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားညစ်ညမ်းရုပ်အသုံးပြုခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်၊
Grubbs ၏ "ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများ" ၏နမူနာသည်ကဏ္crossများမပါ ၀ င်သောကြောင့်ပိုမိုမြင့်မားသောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များသို့မဟုတ်နောက်ခံပြissuesနာများကိုမလွှဲမရှောင်လမ်းလွဲစေခဲ့သည်။
အပ်ဒိတ်: လေ့လာမှုအသစ်နှစ်ခုက“ ဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်” ဟုမှတ်မိသောနှလုံးသားကိုထိုးဖောက်စေသည်
အပိုင်း TWO: တစ်အနည်းငယ် Selected တောင်းဆိုချက်များ၏ Critique သည်
ဤအပိုင်းတွင် Gola သို့ပြန်ကြားချက်တွင်မထောက်ခံသည့်အခိုင်အမာပြောဆိုချက်များနှင့်မှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ထားသည်။ Reply to Gola အားလိုင်းဖြင့်စိန်ခေါ်ရန်သွေးဆောင်နေစဉ်၎င်း၏အဓိကအားနည်းချက်မှာ ၄ င်း၏အငြင်းပွားမှုများသည်ထင်သာမြင်သာရှိသည်။ သူတို့ကအကြောင်းအရာများ၏ဖြေရှင်းရန်ပျက်ကွက် YBOP ဝေဖန်မှု ၏ဒါမှမဟုတ်9peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း Prause et al ။ ၂၀၁၅ (Matuesz Gola's အပါအ ၀ င်) ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015။ အားလုံး9ကျွမ်းကျင်သူသဘောတူလေ့လာဆန်းစစ် Prause et al။ , 2015 အမှန်တကယ်စွဲမော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီသော desensitization သို့မဟုတ်လေ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မဟုတ်သလို Prause ဟာသိသာဖြေရှင်းပါဘူး: ရင်တောင် Prause et al ။ 2015 cue-reactivity ကိုမတွေ့ရပါ၊ compulsive porn users များတွင် cue-reactivity (သို့) cravings (sensitization) ကိုအစီရင်ခံထားသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှု ၂၁ ခုရှိသည်။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက်အထိခိုက်မခံခြင်း (cue-reactivity & cravings) သတင်းပို့ခြင်းလေ့လာမှုများ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24။ သိပ္ပံများတွင်သင်တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုနှင့်အတူလိုက်မသွားဘူး - သငျသက်သေအထောက်အထား၏သဘောအရဆိုလျှင်အတူသွားပါ။
ဂါလာအားပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း၏အောက်ပါအခိုင်အမာများသည်မာတူးရှိုဂိုလာ၏စိုးရိမ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် Prause et al ။ , 2015 အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကို။ အများအပြားကအဓိကကဒီမှာရှိတဲ့အပြစ်အနာအဆာများနှင့်အခြား Prause လေ့လာရေးအလေးအနက်သံသယဆိုလေ့လာမှုရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်တောင်းဆိုမှုများထားခဲ့ပါ:
ဘာသာရပ်များ (အလားအလာဘာသာရပ်များသာတစ်ခုတည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေကြား) porn စွဲအဘို့အပြမခံခဲ့ရပါ။
အသုံးပြုသောမေးခွန်းပုံစံများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုမမေးဘဲ“ စွဲလမ်းမှု” ကိုအကဲဖြတ်ရန်မသင့်ပါ။
ဘာသာရပ်များသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (အထီး, အမြိုးသမီး, Non-လိင်ကွဲ) တို့ဖြစ်သည်။
ဘာသာရပ်များသဖွငျ့စိတ်ရောဂါအခြေအနေများ, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, စိတ်ဆေးဝါးများ, အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, အမူအကျင့်စွဲလမ်း, ဒါမှမဟုတ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါများ (အရာမဆိုတစ်ခုတည်းတဦးတည်းသီးခြားဖြစ်ပါသည်) အတွက်ပြမခံခဲ့ရပါ။
တိုင်ကြားပါရန်, Reply: Prause et al ။ , ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်မည်သည့်ဘာသာရပ်သည်မည်သည့်ဘာသာရေးစွဲသူများဖြစ်သည်ကိုရှာဖွေစုဆောင်းရန်နှင့်“ မှန်ကန်သော” နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် Voon et al ။ , 2014 မရကိုပြု၏။
အဘယ်အရာကိုမျှထိုအဖြစ်အမှန်တရားကနေနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင် Prause et al ။ နည်းစနစ်စဉ်တိုင်းအဆင့်တွင်ပျက်ကွက် Voon et al။ ယင်း၏“ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ” ဘာသာရပ်များ (မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဘာသာရပ်များ) ကိုစုဆောင်းခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းတို့တွင်တိကျသောနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အနည်းငယ်သောနောက်ခံ။ Prause ယင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ပျမ်းမျှအား “ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ” ၅၅ ၏ EEG ဖတ်ရှုခြင်းသည် ပျမ်းမျှအား 67 ၏ EEG ဖတ် "non- စွဲ။ " သို့သျောလညျး၏တရားဝင်မှု Prause et al ။ , 2015 တစ်ဦး၏ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများနှိုင်းယှဉ်အပေါ်လုံးဝမှီခိုပါလိမ့်မယ် အုပ်စု of porn စွဲ တစ်ဦးမှ အုပ်စု of Non-စွဲ။ Prause ၏မှားယွင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာခေါင်းစဉ်များတရားဝင်ဖြစ်ရန် အားလုံး Prause ၏အကြောင်းအရာ ၅၅ ခုသည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများဖြစ်ရန်လိုလိမ့်မည်။ မဟုတ်အချို့သောမဟုတ်ဘဲအများဆုံး, ဒါပေမယ့် တိုင်းတစ်ခုတည်းဘာသာရပ် (Voon ရဲ့ကဲ့သို့) ။ ဆိုင်းဘုတ်များအားလုံးသည်မစွဲလမ်းသူများအဖြစ်ချီးမွမ်းခြင်းခံရသောဘာသာရပ် ၅၅ ခုကိုရည်ညွှန်းသည်။ မှကောက်နှုတ်ချက် သံမဏိ et al ။, 2013 (ထို3Prause လေ့လာရေးအတွက်အလုပ်တစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဖယ်စံဖော်ပြထားတယ်Prause et al ။, 2013, သံမဏိ et al။ , 2013, Prause et al ။, 2015)
“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအတွက်ကုသမှုခံယူနေတဲ့လူနာတွေကိုကန ဦး အစီအစဉ်တွေအနေနဲ့စုဆောင်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကဒီစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို VSS နဲ့ထိတွေ့မှုကပြန်လည်သက်ရောက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့်တားဆီးတာကိုတားမြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအစားသင်တန်းသားများကိုအွန်လိုင်းမှ Pocatello, Idaho အသိုင်းအဝိုင်းမှစုဆောင်းခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရခဲ့ကြသည်သူတွေကိုတောင်းခံကြော်ငြာများ။ "
ဒါပဲ။ ပါ ၀ င်မှုအတွက်တစ်ခုတည်းသောစံနှုန်းမှာမေးခွန်းတစ်ခုကိုဟုတ်ကဲ့ဟုဖြေဆိုခြင်းဖြစ်သည် -သငျသညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများသင့်ကြည့်ရှုထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရ။ " ပထမဆုံး သိသာအမှား သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရှုအကြောင်းကိုမေးတယ်ထားတဲ့အသုံးပြုသောစိစစ်မေးခွန်းကပါဝင်ပတ်သက် ပုံရိပ်တွေမဟုတ်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း, (အများဆုံးပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေ porn ၏ပုံစံဖြစ်ပေါ်လာရသော) အထူးသဖြင့် streaming ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ။
တစ်ဦးကအများကြီးပိုကြီးတဲ့အပြစ်အနာအဆာအတွက် Prause လေ့လာရေးအဖြစ် (ကလိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစွဲမေးခွန်းလွှာ အသုံးပြု. အလားအလာဘာသာရပ်များပြခဲ့ပါဘူးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ Voon et al။ ) ကိုပြု၏။ မဟုတ်သလိုအလားအလာဘာသာရပ်များ (porn အသုံးပြုမှုကိုအဆိုးသူတို့စွဲတူသောရောဂါလက္ခဏာများကြုံတွေ့ရှိမရှိသူတို့ porn မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းရှိမရှိ, သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုထိခိုက်, ဒါမှမဟုတ်ဖူးခြင်းရှိမရှိဟုမေးခဲ့သည်Voon et al အဖြစ်။ ) ကိုပြု၏။
အမှန်တကယ် porn စွဲများအတွက်ဘာသာရပ်များမျက်နှာပြင်ဖို့ပျက်ကွက်သာပိုဆိုးလာသည်3Prause လေ့လာရေးရှက်ကြောက်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ပုံမှန်အားဖြင့်စွဲလမ်းလေ့လာမှုများအတွက်အလုပ်စံဖယ်စံလျစ်လျူရှုရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Prause လေ့လာရေးမ:
စိတ်ရောဂါအခြေအနေများ (အလိုအလျောက်ဖယ်) အတွက် screen ဘာသာရပ်များ
အခြားအစှဲ (အလိုအလျောက်ဖယ်) အတွက် screen ဘာသာရပ်များ
သူတို့ (မကြာခဏသီးခြား) စိတ်ကိုဆေးသုံးပြီးခဲ့ကြသည်လျှင်ဘာသာရပ်များမေးပါ
သူတို့အားလောလောဆယ်တွင်သုံးပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးများ (အလိုအလျောက်ဖယ်) အတွက် screen ဘာသာရပ်များ
Voon et al။ , 2014 သူတို့သာတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြစေရန်အားလုံးအထက်ပါအများကြီး သာ. ပြု၏, porn ဘာသာရပ်များစွဲ။ သေး Prause et al။ , 2015 သူတို့အလုပ်ဝန်ခံ အဘယ်သူမျှမ ဘာသာရပ်များဖယ်ထုတ်ပြီးအဘို့စံ:
"hypersexuality ဟာပြdiagnosis္ဌာန်းထားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး၊ လူနာတွေကိုစုဆောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တားမြစ်ထားတာမို့ပြproblemနာရှိတဲ့သုံးစွဲသူတွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဘယ်တံခါးခုံကိုမှမသုံးနိုင်ပါဘူး"
Prause ၏အမြင်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုကိုသာဖြေခြင်းသည်ရိုးရှင်းစွာလေ့လာခြင်းအတွက်ဖယ်ထုတ်ခြင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပုံရသည်။ ၎င်းသည် Prause ၏အကြောင်းအရာများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများမဟုတ်ခြင်းအပေါ် Matuesz Gola ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူတို့သည်တစ်ပတ်လျှင်ပျမ်းမျှ ၃.၈ နာရီသာကြည့်ပြီး Voon ၏တစ်ပတ်လျှင် ၁၃.၂ နာရီကြည့်သည်။
မာတေယူချ် Gola: "ဒါဟာ Prause et al အတွက်သတိပြုမိထိုက်သည်။ (၂၀၁၅) ပြproblemနာရှိသောသုံးစွဲသူများသည်တစ်ပတ်လျှင်ပျမ်းမျှ ၃.၈ နာရီအလိုက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုသည်။ တစ်ပတ်လျှင်ပျမ်းမျှ ၄.၀၉ နာရီသုံးစွဲသောKühn and Gallinat ရှိ (၂၀၁၄) ပြproblemနာမဟုတ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများနှင့်တူညီသည်။ Voon et al ၌တည်၏။ (၂၀၁၄) ပြ-နာမရှိသောသုံးစွဲသူများသည်တစ်ပတ်လျှင် ၁.၇၅ နာရီနှင့်တစ်ပတ်လျှင် ၁၃.၂၁ နာရီ (SD = ၉.၈၅) - Voon မှမေလ ၂၀၁၅ တွင်အမေရိကန်စိတ်ပညာသိပ္ပံညီလာခံတွင်တင်ပြခဲ့သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာမှုအဘို့အတစ်ပတ်ကို porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏နာရီအတွင်း:
Voon et al: 13.2 နာရီ (အားလုံး porn စွဲခဲ့ကြသည်)
Kuhn & Gallinat: 4.1 နာရီ (ဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းစွဲအဖြစ်ခွဲခြားခံခဲ့ရသည်)
Prause et al: 3.8 နာရီ (အဘယ်သူမျှမသိတယ်)
သူတို့ကကြည့်သောအခါ Prause ၏အကြောင်းအရာ ၅၅ ခုသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများဖြစ်နိုင်ပုံကို (“ အပြာစွဲလမ်းမှုကိုလှည့်စားခြင်း” အတွက်) Gola ကစဉ်းစားခဲ့သည်။ နည်းသော ယင်းထက် porn Kühn & Gallinat, 2014 Non-စွဲ။ ဘယ်လိုကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင် အားလုံး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်“ စွဲလမ်းသူများ” ဖြစ်သည် အဘယ်သူမျှမ ၏ Kühn & Gallinat ဘာသာရပ်များသည်လိင်စွဲသူများလော။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၎င်းတို့သည်တံဆိပ်ကပ်ထားသည်၊ ဘာသာရပ်များသည်“ အတု” ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောသုတေသနကိုသင်မလုပ်မီလေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဤသည်မူလတန်းသိပ္ပံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
သို့ဆိုလျှင် Prause & ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သူတို့၏ဘာသာရပ်များအားစုဆောင်းမှုနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကွာဟချက်များစွာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းသနည်း။ ၏စေ့စပ်နည်းစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့် Voon et al ။ , 2014! ပထမဦးစွာစုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ဖော်ပြချက်, porn စွဲဘို့အကဲဖြတ်စံနှုန်းများနှင့်ဖယ်စံထံမှ excerpted Voon et al ။, 2014 (ကိုလညျးရှု Schmidt က et al ။, 2016 & BANCA et al ။, 2016):
CSB ဘာသာရပ်များသည်အင်တာနက်အခြေပြုကြော်ငြာများနှင့်ကုထုံးပညာရှင်များထံမှရည်ညွှန်းမှုများမှစုဆောင်းခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်နှင့်လိုက်ဖက်သည့်အမျိုးသား HV ကို East Anglia ဒေသရှိလူထုအခြေပြုကြော်ငြာများမှစုဆောင်းခဲ့သည်။ CSB ဘာသာရပ်အားလုံးအား CSB အတွက်ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး မှလူတွေ့မေးမြန်းခဲ့သည် (hypersexual disturb နှစ်မျိုးလုံးအတွက်အဆိုပြုထားသည့်ရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် [Kafka, 2010; ရိဒ် et al ။ , 2012] နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ [Carnes et al ။ , 2007]), အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း compulsive အသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်။ ဒါကအရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစကေး (ASES) [Mcgahuey et al တစ်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ , 2011] မေးခွန်းများကို သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ချို့ယွင်းကိုယ်စားပြုပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များနှင့်အတူ, 1-8 တစ်စကေးအပေါ်ဖြေကြားခဲ့သည်ရသော။ အဆိုပါတွေကို၏သဘောသဘာဝပေးထား, ရှိသမျှ CSB ဘာသာရပ်များနှင့် HV ယောက်ျားနှင့်လိင်ကွဲခဲ့ကြသည်။ အားလုံး HV CSB ဘာသာရပ်များနှင့်အတူအသက်-လိုက်ဖက် (အသက်၏5နှစ်ပေါင်း±) တို့ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ [ယခင်က BANCA et al ပွုပါပွီအဖြစ်ဘာသာရပ်များလည်း MRI ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူလိုက်ဖက်မှုအတှကျအပြခံခဲ့ရသည်။ , 2016; Mechelmans et al ။ , 2014; Voon et al ။ , 2014] ။ သီးခြားသတ်မှတ်ချက်အသက် 18 နှစ်အောက်ဖြစ်ခြင်း Sud တစ်သမိုင်းရှိခြင်း, (ဆေးခြောက်အပါအဝင်) တရားမဝင်တ္ထုများတစ်ခုကလက်ရှိပုံမှန်အသုံးပြုသူဖြစ်ခြင်း, နှင့်လက်ရှိအလယ်အလတ်-ပြင်းထန်အဓိကစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအပါအဝင်လေးနက်စိတ်ရောဂါရောဂါ, ရှိခြင်း, သို့မဟုတ်ထည့်သွင်း စိတ်ကြွရောဂါသို့မဟုတ် schizophrenia (ထို Mini ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ Inventory သုံးပြီးပြ) [Sheehan et al ၏သမိုင်း။ , 1998] ။ အခွားသော compulsive သို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲကိုလည်းချန်လှပ်ခဲ့သညျ။ ဘာသာရပ်များအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသို့မဟုတ်လူမှုရေးမီဒီယာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ် compulsive စျေးဝယ်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုအာရုံစိုကျလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်မူးရူး-အစာစားခြင်းရောဂါရောဂါ၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းတဲ့စိတ်ရောဂါများကအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များအတွက် UPPS-P ကို ​​Impulse အပြုအမူစကေး [Whiteside နှင့် Lynam, ပြီးစီးခဲ့ 2001] Impulse အကဲဖြတ်ရန်, နှင့် Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory [Beck et al ရန်။ , 1961] စိတ်ကျရောဂါအကဲဖြတ်ရန်။ 23 CSB ဘာသာရပ်များနှစျယောကျစိတ်မကျဆေး Antidepressants ယူပြီးခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်ယေဘူယျစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါနှင့်လူမှုရေး phobia (comorbid ခဲ့သည်N = 2) သို့မဟုတ်လူမှုရေး phobia (N = 1) သို့မဟုတ် ADHD ၏ကလေးဘဝသမိုင်း (N = 1) ။ ရေးသားထားသောအသိပေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပြီးထိုလေ့လာမှုကိုကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များသူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ "
“ CSB (အသက် ၂၅.၆၁ (SD ၄.၇၇) နှစ်) နှင့်အသက် ၁၉ နှစ် (အသက် ၂၃.၁၇ (SD ၅.၃၈) နှစ်) ရှိလိင်ကွဲလိင်ခြားသူ ၁၉ ဦး ကိုလေ့လာခဲ့ပြီး CSB မပါဘဲလိင်ကွဲယောက်ျားများကျန်းမာသန်စွမ်းသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ S1 file) ။ အလားတူအသက်တစ်ခုအပိုဆောင်း 25 (25.33 (SD က 5.94) နှစ်) အထီးလိင်ကွဲကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းဗီဒီယိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ CSB ဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်သူတို့အလုပ်မှာသုံးစွဲဖို့မှုကြောင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (N ကို = 2), ရငျးနှီးဆက်ဆံရေးပျက်စီးသို့မဟုတ်အဆိုးအခြားလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (N ကို = 16), လျော့နည်းသွားလိင်စိတ်သို့မဟုတ် erectile ကြုံတွေ့ အထူးသ (မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဆက်ဆံရေးအတွက်ပေမယ့်) မိန်းမနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက် function ကို (N ကို = 11), ကိုအသုံးပြုစောင့်အရှောက်အလွန်အကျွံ (N ကို = 3), သတ်သေ ideation (N ကို = 2) တွေ့ကြုံနှင့်ငွေပမာဏကို အသုံးပြု. (N ကို = 3; £ 7000 ကနေ£ 15000 မှ) ။ ဆယ်ပါးဘာသာရပ်များဖြစ်စေခဲ့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အပြုအမူများအတွက်အကြံပေးခြင်းရှိကြ၏။ အားလုံးဘာသာရပ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏မြင်ကွင်းနှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များတွင်လည်းအစောင့်အကြပ်န်ဆောင်မှုများ (N ကို = 4) နှင့်ဘာ၏အသုံးပြုမှုကို (N ကို = 5) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါအရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစကေးတစ်ခုအဆင်ပြေအောင်ဗားရှင်းတွင် ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် CSB ဘာသာရပ်များလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အတူသိသိသာသာပိုပြီးအခက်အခဲရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွင်ပိုမို erectile အခက်အခဲများကြုံတွေ့ပေမယ့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း sexually ဖို့မ (စားပွဲတင် S3 အတွက် S1 file) ။ "
Gola ကောက်နုတ်ချက်တိုက်စစ်ဖို့ပြန်မယ် Voon et al ။, 2014:
Gola ကကျွန်ုပ်တို့၏ပြသနာများတွင် erotica ပြofနာကိုလေ့လာခြင်းထက်စာလျှင်ရုပ်ရှင်သုံးစွဲမှု၏နာရီများသည်နိမ့်ကျနေသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏စာတမ်းတွင်ထောက်ပြခဲ့သည် (စာပိုဒ်အစတွင်“ ပြproblemနာအုပ်စုသည်သိသိသာသာပိုမိုအစီရင်ခံခဲ့သည်”) ။ Gola က Voon et al မှပြ sample နာနမူနာထက်လိင်ရုပ်ရှင်ကားကြည့်ခြင်းကိုနာရီအနည်းငယ်သာဖော်ပြသည်ဟုဆိုသည် (2014) ။ သို့သော် Voon et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှက်ကွဲခြင်းမြင့်မားသောပါဝင်သူများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်း၊ လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှကြော်ငြာများ၊ DSM-5 မှအသိအမှတ်မပြုသည့်“ ညစ်ညမ်းမှု” အသုံးပြုသည့်အမျိုးသားများ၊ "porn" ၏ "ထိခိုက်မှု" အဖြစ်။ စွဲလမ်းတံဆိပ်များကိုကျင့်သုံးသူများသည်လူမှုရေးအရရှေးရိုးစွဲတန်ဖိုးများနှင့်မြင့်မားသောဘာသာတရားများရှိကြောင်းပြသခဲ့သည် (Grubbs, Exline, Pargament, Hook, & Carlisle, 2014) ။ ဒါဟာ Voon et al ကြောင်းပိုမိုဖွယ်ရှိသည်။ (၂၀၁၄) နမူနာသည်အွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းအားဖြင့်မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့ခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည်။ ထို့အပြင်“ ညစ်ညမ်းမှု” အသုံးပြုမှုကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ထားသောအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်စံသတ်မှတ်ထားသောမေးခွန်းပုံစံမဟုတ်ဘဲအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်စနစ်တကျအင်တာဗျူးအတွက်မွေးရာပါ psychometrics နှင့်သွယ်ဝိုက်ဘက်လိုက်မှုမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကလေ့လာမှုအကြားလိင်ရုပ်ရှင်အသုံးပြုမှုအစီအမံများနှိုင်းယှဉ်ရန်ခက်ခဲစေသည်။ အုပ်စုများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာဗျူဟာသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအတွက်စိတ်ဆင်းရဲမှုစံသတ်မှတ်ချက်၏အရေးကြီးပုံကိုပြသသည့်ကျယ်ပြန့်စွာကိုးကားထားသောအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ (Bancroft, Loftus, & Long, 2014)
၎င်းသည် Prause ၏အားနည်းသောစိစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှစာဖတ်သူ၏အာရုံကိုလွှဲပြောင်းရန်တွက်ချက်ထားသည့်အလွယ်တကူဖယ်ထုတ်ထားသောမှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များနှင့်မလိုအပ်သောတောင်းဆိုမှုများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စတင်သည် -
Gola မှ Reply: သို့သော် Voon et al ။ အထူးသလိင်-ရုပ်ရှင်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အရှက်ကွဲခြင်း-based ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာကြော်ငြာအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှက်ကွဲခြင်းအတွက်မြင့်မားသောသင်တန်းသားများကိုများအတွက်စုဆောင်း, "porn" ရှိနေသော်လည်း "ကုသမှု-ရှာကြံ" လူရှုမြင်သုံးသပ်ကြတဲ့ရုပ်သံလွှင့်ပြသသောအားဖြင့် DSM-5 အသိအမှတ်ပြုများနှင့်ရန်ပုံငွေနှင့်အတူမအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ၏ "ပျက်ဆီး" အဖြစ် "porn ။ "
ပထမ ဦး စွာ Gola သို့ပြန်ကြားချက်တွင်ပါဝင်သူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှက်ကွဲခြင်းကိုခံစားခဲ့ရခြင်းသို့မဟုတ်“ ရှက်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ” ဟုခေါ်ဆိုခြင်းခံရသည်ဟုပြောဆိုခြင်းကိုထောက်ခံရန်အထောက်အထားမရှိပါ။ ယင်းသည်အခြေအမြစ်မရှိသောဝါဒဖြန့်ခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Prause လေ့လာမှုများ Mormonism ၏ 50% ကျော်ဖြစ်သော Pocatello, Idaho မှဘာသာရပ်များစုဆောင်းခဲ့သည်။ ဗြိတိန်တွင်လူအများစုဆောင်းထားသည့် Voon ၏ဘာသာရပ်များနှင့်မတူဘဲ Prause ၏ဘာသာရေးဘာသာတရားများသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်အရှက်ရခြင်းသို့မဟုတ်အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဒုတိယ - Voon ရဲ့ပါ ၀ င်သူအတော်များများ ခဲ့ကြ ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုအတွက်ကုသမှုကိုရှာဖွေပြီးကုသသူများကရည်ညွှန်းသည်။ ညစ်ညမ်းမှုစွဲနေသောအကြောင်းအရာများကိုသေချာစေရန်အဘယ်နည်းလမ်းကောင်းရှိသနည်း။ အလွန်ထူးဆန်းသည်မှာ Gola သို့ပြန်ကြားချက်သည် Prause လေ့လာမှုများကိုအသုံးပြုလိုသောကြောင့်၎င်းသည်အနုတ်လက္ခဏာအဖြစ် (မတတ်နိုင်သောအစွမ်းထက်မဟုတ်ဘဲ) လှည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သာ လိင်စွဲလမ်းသူများအား“ ကုသမှုရှာဖွေခြင်း” ကိုပြုသည်၊ သို့သော်တက္ကသိုလ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကတားမြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံး Prause EEG လေ့လာမှုမှယူသည်။
သံမဏိ et al, 2013 ။ : "စုဆောင်းခံရဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်ကုသမှုလူနာတွေအတွက်ဟုခေါ်တွင်ကနဦးအစီအစဉ်များသို့သော်ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား VSS နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းကြောင့်ဤလူသစ်စုဆောင်းခြင်းကိုတားမြစ်ခဲ့သည်။ ”
တတိယအချက် Gola ဖို့စာပြန်ရန်ကြောင့်ဟုဆိုကာကလုံးလုံးလြားလြားမုသားမှ stoops Voon et al။ ၂၀၁၄ ကို“ ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲ” မှထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသကဲ့သို့ Voon et al ။ , 2014, လေ့လာမှုကို“ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သည်။Wellcome Trust မှ":
Voon et al, 2014 ။ : "ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: Wellcome Trust မှအလယ်အလတ် Fellowship ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေရှာခြင်း (093705 / Z / 10 / Z) ။ Dr. Potenza သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနမှထောက်ပံ့ငွေ P20 DA027844 နှင့် R01 DA018647 တို့မှထောက်ပံ့သည်။ Connecticut ပြည်နယ်စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်စွဲဝန်ဆောင်မှုများဌာန၊ Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ၊ နှင့်တာဝန်ရှိကစားကွင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားစင်တာမှလောင်းကစားဆိုင်ရာသုတေသနဆုကိုရရှိသည့်စင်တာ။ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရေးစာမူကိုပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူများသည်အခန်းကဏ္hadတွင်မရှိခဲ့ပါ။ ”
ဒီပိုမမှန်သောနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောထုတ်ပြန်ချက်များအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Gola ဖို့စာပြန်ရန်သည့်အကြောင်းကိုအခြား untruth အတွက်ပစ် Voon et al ။ စုဆောင်းမှု / အကဲဖြတ်နည်းစနစ်:
Gola မှ Reply: ဒါ့အပြင် "porn" အသုံးပြုမှုကိုစနစ်တကျအင်တာဗျူး, မတစ်ဦးစံမေးခွန်းလွှာစဉ်အတွင်းအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
အယူမှား။ အလားအလာရှိသောဘာသာရပ်များပြခုနှစ်တွင် Voon et al ။ , 2014 ကိုအသုံးပြု လေး စံချိန်စံညွှန်းမီမေးခွန်းလွှာ နှင့် တစ်ခုကျယ်ပြန့်စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူးအလုပ်။ အောက်ပါထံမှယူစိစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏တာရှည်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည် BANCA et al ။, 2016 (CSB compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်ပါသည်):
Voon et al, 2014 ။ : CSB ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် ပြ အင်တာနက်ကိုလိင်စိစစ်စမ်းသပ် (ISST သုံးပြီး; Delmonico နှင့် Miller က 2003) နှင့်စတင်ခြင်း, အကြိမ်ရေ, ကြာချိန်, အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစား, abstinence, အသုံးပြုမှုပုံစံများ, ကုသမှုနှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များ၏အသက်အရွယ်နှငျ့ပတျသကျသောပစ္စည်းများမပါဝင်သည့်ပြည့်စုံစေ့စပ်စမ်းသပ်-ဒီဇိုင်းမေးခွန်းလွှာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်စံ; CSB သင်တန်းသားများကိုသူတို့ CSB များအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံနှစ်စုံ (Hypersexual Disorder များအတွက်အဆိုပြုအဖြေရှာတဲ့စံမပြည့်စုံအတည်ပြုဖို့စိတ်ရောဂါများကတွေ့ဆုံမေးမြန်းကြသည် ဟူ. ၎င်း, Carnes et al ။ , 2001; Kafka, 2010; ရိဒ် et al ။ , 2012), အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများ၏မသင်မနေရအသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်။ လူမှုရေး၊ ဘဏ္financialာရေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများရှိသော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်းအပါအ ၀ င်လိင်အပြုအမူများကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်မှုသည်ဤစံနှုန်းများကအလေးပေးဖော်ပြသည် CSB ရောဂါလက္ခဏာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် Voon et al ။ (2014).
Gola သို့ပြန်ကြားချက်သည် Prause လေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုသောလုံးဝမရှိသည့်စိစစ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (ဘာသာရပ်များသည်မေးခွန်းတစ်ခုကိုသာအဖြေပေးသည်) နှင့်ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်ပြီးကျွမ်းကျင်သည့်စိစစ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ဝံ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Voon et al ။ , 2014:
အင်တာနက်ကိုလိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်, Delmonico နှင့် Miller က 2003
အဆိုပါ3အများဆုံးအသုံးများမေးခွန်းကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်သတ်မှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦးစိတ်ရောဂါများကတွေ့ဆုံမေးမြန်း: Carnes et al ။ , 2001; Kafka, 2010; ရိဒ် et al ။ , 2012)
စတင်ခြင်း, အကြိမ်ရေ, ကြာချိန်, အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစား, abstinence, အသုံးပြုမှုပုံစံများ, ကုသမှုနှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များ၏အသက်အရွယ်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအပေါ်ကျယ်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး-ဒီဇိုင်းမေးခွန်းလွှာ။
စကားမစပ်, ဤလုပ်ငန်းစဉ် porn စွဲ၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုရန်ရုံစိစစ်ရှိ၏ Voon et al။ အဲဒီမှာမရပ်ခဲ့ဘူး စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု၊ OCD သို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်မသန်မစွမ်းသောရောဂါများနှင့်လက်ရှိသို့မဟုတ်အတိတ်တွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားပြုသူများအားမေးခွန်းလွှာများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများမှဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ Prause လေ့လာရေးမှသုတေသီများဤအမှုကိုမျှမအမှုကိုပြု၏။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Gola ဖို့စာပြန်ရန် porn စွဲဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်းထက် ပို. ဘာမျှမသောကလက်ခံပြောဆိုချက်ကို regurgitates,
Gola မှ Reply: "စွဲလမ်းတံဆိပ်များကိုခံယူသူများသည်လူမှုရေးရှေးရိုးစွဲတန်ဖိုးများနှင့်မြင့်မားသောဘာသာတရားများ၏သမိုင်းကြောင်းရှိကြောင်းပြသခဲ့သည် (Grubbs, Exline, Pargament, Hook, & Carlisle, 2014) ။ "
porn စွဲနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုအကြားအခိုင်အမာဆက်စပ်မှုခဲ့သည် အထက်ဖြေရှင်း နှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဒီ debunked ကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ယောရှု Grubbs ပစ္စည်း။
Gola မှ Reply အတွက်လေးနက်သောအပြစ်အနာအဆာ evades Prause et al ။, 2015: ဘာသာရပ်များ၏လက်မခံနိုင်မတူကွဲပြားမှု
Nicole Prause ၏အငြင်းပွားဖွယ် EEG လေ့လာမှုများကိုဝေဖန်မှုများ (သံမဏိ et al။ , 2013, Prause et al ။, 2015) ဘာသာရပ်များကိုအသုံးပြု။ "စိတ်ပျက်အားငယ်" porn ၏ကွဲပြားခြားနားသောသဘောသဘာဝနှင့်ပတ်သက်။ ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြင့်တက်ပါပြီ။ EEG လေ့လာမှုများတွင်အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ လိင်ကွဲများနှင့်လိင်ကွဲလိင်ကွဲသူများမပါ ၀ င်သော်လည်းသုတေသီများက၎င်းတို့အားလုံးသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအထီး + မိန်းမအပြာများကိုပြသခဲ့သည်။ သုတေသီများရွေးချယ်သောစွဲလေ့လာမှုများအတွက်ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဖောက်ဖျက်သောကြောင့်၎င်းသည်အရေးကြီးသည် တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း အသက်၊ ကျား၊ မ၊ တိမ်းညွတ်မှုနှင့်ဆင်တူသောအိုင်ကျူ (IQ) အရဘာသာရပ်များ (ပိုပြီး ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်ယွင်းရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်) ။
တစ်နည်းမှာ2EEG လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုယောက်ျား, အမျိုးသမီးနှင့် Non-လိင်ကွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုမရှိကွဲပြားခြားနားသောအဓိကအကြောင်းရင်းအပေါ်မှီခိုခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်မှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်အတည်ပြုပြီးနောက်ရသေးလေ့လာတယျ။ Gola သိနှင့်မှတ်စု၌ဤဆိုးဝါးအားနည်းချက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့:
မာတေယူချ် Gola: "မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ arousal နှင့် valence ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ ratings လိင်အကြားသိသိသာသာကွာခြားကြောင်းပြသစဉ်ကအတူတကွယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများကိုများအတွက်စာရေးဆရာများပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုကိုသတိပြုမိဖို့ထိုက် (ကြည့်ပါ။ Wierzba et al, 2015) ။ "
တစ်ဦးလင်းမှုမရှိခဲ့ကြောင်းခုနှစ်, Gola ဖို့စာပြန်ရန်အခန်း၌ဤဆင်လျစ်လျူရှု: အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ဦးနှောက် အတော်လေးကွဲပြားခြားနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တုံ့ပြန်ကြသည်။ အဲဒီအစား, Gola ဖို့စာပြန်ရန်နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တို့ကနှိုးဆွလာကိုအသိပေးနှင့်အခြားဆီလျှော်ပျော်စရာအချက်အလက်များ:
Gola ကအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်တူညီသောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုမတုံ့ပြန်သောကြောင့်အမျိုးသမီးများအားအတူတကွတင်ပြခြင်းမပြုသင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တကယ်တော့လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အကြိုက်သည်အလွန်တူညီနေသည် (Janssen, Carpenter, & Graham, 2003) ။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပုံရိပ်များသည်အမျိုးသားများရောအမျိုးသမီးများပါပါ ၀ င်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်တူညီကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိရောက်သောရုပ်ပုံစနစ်မှ“ လိင်ဆိုင်ရာ” ရုပ်ပုံများကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမဟုတ်ဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလုပ်ဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် (Spiering, Everaerd, & Laan, 2004) ။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာလိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှုန်းကွဲပြားခြားနားမှုများသည်လိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းသုတေသနပြသခဲ့သည် (Wehrum et al ။ , 2013) ။ လိင်ဆန္ဒသည်လေ့လာမှုတွင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောကြောင့်လိင်မှုကိစ္စကိုလိင်ဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအကြောင်းဖော်ပြသောလိင်အမျိုးအစားအားခွဲခြားရန်မသင့်တော်ပါ။
အထက်ပါတုန့်ပြန်မှုက Mateusz Gola ၏ဝေဖန်မှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ယောက်ျားလေးနှင့်မိန်းမ ဦး နှောက်အတိအကျကိုကြည့်သည့်အခါ ဦး နှောက်လှိုင်း (EEG) နှင့်သွေးစီးဆင်းမှု (fMRI) ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ EEG လေ့လာမှု တူညီသောလိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုစဉ်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက် EEG ဖတ်နှုန်းပိုများကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် Prause လေ့လာမှုများကဲ့သို့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း EEG ဖတ်ခြင်းကိုအတူတကွနှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်ပါ။ အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအရာတစ်ခုဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ Prause လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းရောနှောထားသောအုပ်စုတစ်ခု၏ ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုများကိုအခြားရောနှောထားသောအုပ်စုတစ်ခု၏ ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။
အဘယ်သူမျှမအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ် porn သုံးစွဲသူများအာရုံကြောလေ့လာမှုများပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ (Prause's မှလွဲ၍) ရောနှောထားသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း။ အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင်လိင်တူခြင်းနှင့်တူညီသောလိင်တိမ်းညွတ်မှုရှိသည့်ဘာသာရပ်များပါ ၀ င်သည်။ အမှန်စင်စစ်သူမကိုယ်တိုင်ဖော်ပြခဲ့သည် အစောပိုင်းကလေ့လာမှု (2012) တစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအတွက်လွန်စွာကွဲပြားခြားနားကြောင်းကို:
တစ်ဦးက 2013 Prause လေ့လာမှု ဖော်ပြထား:
“ နာမည်ကြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိရောက်သောရုပ်ပုံစနစ် (Lang, Bradley, & Cuthbert, 1999) ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာမှုများစွာသည် သူတို့ရဲ့နမူနာထဲတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုကိုသုံးပါ။ "
အကြီးစားမူကွဲစိတ်မချရသည့် Prause လေ့လာရေးအတွက်ကိုဖန်ဆင်းအမျိုးအစားများ၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက် rendering, ဘာသာရပ်များ (အထီး, အမြိုးသမီး, Non-လိင်ကွဲ) ၏လိင်ကွဲပြားခြားနားအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူမျှော်လင့်ထားခံရဖို့ရှိပါတယ်။
ကျားလိင်စိတ်နိုးထအတွက်ကွာခြားချက်များနှင့် Erotica မှထိခိုက်စေတုံ့ပြန်ချက် (2013)
ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်စိတ်ခံစားမှုနှင့်စီးကရက်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ကွဲပြားအမျိုးအစားများကိုတုန့်ပြန်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာ (LPP): အကြောင်းအရာနှိုင်းယှဉ် (2013)
လိင်အင်္ဂါလိင်စိတ်နိုးထ၏ပုံစံများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: တိုင်းတာခြင်းအပိုငျးအစစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ရပ်? (2009)
ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် Non-ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု (2007) မှအမြင်အာရုံအာရုံစိုက်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု
Visual လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်လိင်ကွာခြားချက်များ: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2007)
တစ်ဦးကအကြောင်းအရာနှိုင်းယှဉ်: ဆေးလိပ်သောက်အတွက်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဆေးလိပ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ကွဲပြားအမျိုးအစားများမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် (LPP) အနှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောနိုင်သည့်အလားအလာ,
အချုပ်အားဖြင့် Prause လေ့လာမှုများသည်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကို“ မှားယွင်းစေခြင်း” နှင့် ပတ်သက်၍ စာရေးသူ၏ပြောဆိုချက်ကိုသံသယဖြစ်စေသည့်ပြင်းထန်သောနည်းစနစ်ဆိုင်ရာအားနည်းချက်များကြောင့် -
ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (အထီး, အမြိုးသမီး, Non-လိင်ကွဲ)
ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် porn စွဲ, စိတ်ရောဂါ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း, သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအဘို့အပြမရ
မေးခွန်းခဲ့ကြသည် porn စွဲသို့မဟုတ် porn အသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုမပေး